Modern Manufacturing Magazine : January-March 2017 Myanmar Edition by Thailand's Industrial & Engineering magazines - Issuu
VOL.2 NO.1 JANUARY-MARCH 2017
New D aw n ofM ya n mar Man u fac t u r i n g
P. 22 Prepare for Big Data!
P. 25 Choosing AC Adjustable Speed Drive for Motor in Manufacturing Works
မဟာသတင်းအချက်အလက် Big Data ကို လက်ခံရန် အသင့်ပြင်ဆင်ထားခြင်း
စက်မှုလုပ်ငန်း၌ မော်တာအမျိုးအစားများအသီးသီးနှင့် သုံးစွဲရန် AC Adjustable Speed Drives ကို ရွေးချယ်ခြင်း
ဒဇီယဆ်ီ မီးအားပေးစက် လေဖအိားပေး မတှု စ်က် အခြားပစည္စ်းကရိယိာများ ဂဟေဆော် မီးအားပေးစက် စလကို မ်ီးပြ မျှောစ်ငယ်ာဉ် လလူကို ပ်ါနငို သ်ည့် ကရနိ်းယာဥင်ယ် ကတ်ေကြးပသုံ ဏ္ဍာနတ်ကသ်ွားသည့် ဝနခ်ျကီရနိ်းယာဥ
759 Rama3 Road, Bangpongpang,
54/15 Moo7Bangna Trad km.25.5,
119/2 Moo3Huapong, Muang,
Tel : (66) 2294 8946-55
Tel : (66) 2708 5991-4
Tel : (66) 3868 2155
EDITOR'S TALK LOCAL MARKETING OFFICE & DISTRIBUTOR: Advance Economy Convenience United Co., Ltd. (AEC United Co., Ltd.) No.(A6), Room No.(F), Natchaung Condomenium, Tamwe Township, Yangon Myanmar. TEL. 01 430 032, 01 551 477
MANAGING DIRECTOR: Dr.Sein Win
JIRAPAT KHAMYAT EDITOR IN CHIEF JIRAPAT.K@GREENWORLDMEDIA.CO.TH
ADVISORY COMMITTEES: ပြည်ထောင် စု သ မ္မ တ မြန် မာနို င် ငံတော် သ ည် လက် ရှိ အ ချိန် ၌ စောင့်ြ ကည့် သ င့် သ ည့် အာဆီ ယံ အဖွ့ဝဲ င် နိုင်ငံတစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။ စက်မှုထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း၏ ဗဟိုစခန်းအဖြစ် ထားရှိရန် သင့်တော်သော ၄င်း၏ သဘာဝသယံ ဇာတပစ္စ ည်းမျာ ပေါကြွ ယ် ၀ သည့် ပထ၀ီ အနေအထားအပြင် တရု တ် ၊ အိန္ဒိ ယ ၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ၊်ထိုင်း၊ လော စသည့်နုင်ိငံများနှင့် နယ်နမိတ်ခြင်းထိစပ်နေသည့် တည်နေရာ အနေအထား များးကြောင့် ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် လူဦးရေထူထပ်သိပ်သည်းမှုအချက်ကိုပါ ထည့်သွင်းပေါင်းစပ် လိုက်ပါက နိုင်ငံကို ကုန်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း၊ ထုတ်ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းတို့အပြင် အခြားနိုင်ငံများဆီသို့ နယ်စပ်တစ်ဆင့်ခံ
ဖြတ်ကျော် ကု န် သွယ် မှုလု ပ် င န်းများ ပြုလု ပ် ရ န် အားသာချက် များရှိ သ ည့် ကြီးမားသော ဈေးကွ က်ြ ကီးဖြစ်လာစေပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ စိုက်ပျုးရေးကဏ္ဍသည်ိနိုင်ငံ့စီးပွားရေး၏ စုစုပေါင်းပြည်တွင်းထုတ်ကုန်တန်ဖိုး (သို့မဟုတ်) GDP ၏ အများဆံုး ရာနှုန်း အဖြစ် ပါဝင်နေချန်ိ် တငွ် နိငုင်၏ံဝင်ငွေရှာ ပေးနိငုေ်သာ စက်မလှုပုင်န်း ကေဏ္ဍပိငုး တွငမ်ူ ရလု ပ် င န်း၊ ပရိဘောဂလု ပ် င န်း၊ အ၀တ် အ ထည်နှ င့် သစ် အ ခြေခံ ထု တ် ကု န် လု ပ် င န်းများ တို့  သာဖြစ်နေပါသေးသည်။ အစိုး ရမှ နိငုင်ြံ ခားရင်းနှးမြှီုပန်မှုံ ကို အားပေးကာ နိငုင်တံ့ ခါံးကို ဖွငလ့် စှလ်ကို သ်ည်အ့ချန်ိ မစှ၍ ပုဂလ္ဂကိပိငုး ကိလုည်း စိကုပ်ျုးမွေိးမြူရေးလုပင်န်း၊ အပေါစားစက့်မလှုပုင်န်းနှင့် ပိေ့ု ဆာင်ဆက်သယွေ်ရးကဏ္ဍများ၌ အတူပူးတွရင်ဲးနှးလီုပ်ကိုင်စေရန် အားပေးထောက်ပံ့မှု ပြုခဲ့ပါသည်။ ထို့  အ ပြင် မြန် မာအစိုးရပို င်းမှ လွ ပ် လ ပ် သ ည့်ဈေးကွ က် စီးပွားရေးစနစ် မူ ၀ါဒကို ဖော်ဆောင် လျက် ၊ ပုဂလ္ဂကိလုပင်န်းရှငမ်ျားကိလုည်း ထုတလ်ပုမ်ကှုဏ္ဍ၊ စီမခံန်ခ့  မွှုဲ ကဏ္ဍရပ်များ၌ ပါဝင်လာစေသည်အ့ပြင်၊ တိငုး ပြည် တံခါးကို ဖွင့်လျက် ကုန်သွယ်မှုကိုပါ တိုးမြှင့်ခဲ့ပါသည်။ ဆိုခဲ့ပါအချက်များသည် မြန်မာပြည်၏ စီးပွားရေးကို စက်မှုလုပ်ငန်းကဏ္ဍဖြင် တွန်းအားပေးမောင်းနှင်သွားမည့် ထင်ရှားသည့်အချက်များ ဖြစ်ပါသည်။
EDITOR: Thossathip Soonsathorn
EDITORIAL STAFF: Pemika Sompong Jeeraporn Thipkhlueb
ART DIRECTOR: Prin Prangpan
ဤ Modern Manufacturing ၏ Myanmar Edition သည် နည်းပညာ၊ ထုတ်လုပ်မှု၊ အစားအစာ ပြုပြင်ထုတ်လုပ်မှု၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားစနစ်၊ စက်ရုတွံင်းဘေးကင်းလုံခြုံရေးတို့အပြင် Product Show နှင့်
Directory of Industrial Machinery and Equipment များရှိ စက်ယန္တရားနှင့် စက်ကိရိယာတန်ဆာပလာ
ဆိုင်ရာ နည်းပညာများ အစရှိသည့် သတင်းအချက်အလက်နှင့် စက်မှုကဏ္ဍတွင်းရှိ ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုများ ဆိုင်ရာတို့ကို တင်ဆက်ပေးသည့် မီဒီယာတစ်ခုအဖြစ် ပူးပေါင်းပါဝင် ဖြည့်ဆည်းပေးသွားပါမည်။ စာစောင်အလုပ်အဖွ့အဲနေဖြင့် ဤ Modern Manufacturing စာစောင်သည် လုပ်ငန်းရှင်တိုင်း အတွက် မြန်မာနိုငင်၏ံစက်မှု လုပင်န်းကဏ္ဍကို ရည်မနှ်း ချက်ပန်းတိငုဆ်သီို့ အရောက်ပလ့ို မှ်း ရာ၌ အမြဲပင် အသိပညာနှင့် အကျုးတရားများကို ပေးစွမ်း နိုငမ်ည်ဟနုငှ့် လူအများ၏ နွေးထွေးစွာ လက်ကမ်းကြိုဆိမုကှို ရရိမှည်ဟု အထူးပင် မျှော်လင့်ပါသည်။
ACCOUNT DIRECTOR: Phatsita Srisimarat
ADVERTISING SALES REPRESE NTATIVE: Aunyarin Jeerakomonpong Ponlaekha Boonyuen
ADVERTISING COORDINATOR: Wilaiporn Ratchapanya
GROUP MARKETING MANAGER: Phattranit Charoenpholjan
PRINTING: G.P. Cyberprint Co., Ltd TEL: (+66) 2731 1155-60
4 MODERN MANUFACTURING MYANMAR EDITION
FAX: (+66) 2731 0936
INTELLIGENT MARKETPLACE FOR SMART FACTORY
IF YOU'RE LOOKING FOR MANUFACTURING EQUIPMENT & TOOLS,
WWW.FACTORYEASY.COM HAS MORE THAN 10,000 PRODUCTS AWAIT YOU.
WWW. FACTORY EASY.COM
CONTENTS VOL.2 NO.1 JANUARY - MARCH 2017
ရော်ဘာရွှေခေတ်	ကုန်ပြီ ရွှေထည်များ	ရောင်းဖို့	အချန်ိ ရောက်လာပြီ Process Rubber, The Rise of the Golden Age
Boiler	စနစ်ကို	တိုးတက်အောင်	ပြုပြင်ခြင်းဖြင့် စွမ်းအင်ကုန်ကျစရိတ်ကို	လျော့ကျစေခြင်း Reduce Energy Cost with Boiler Improvement
ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုကို	လျှော့ချရန်အတွက်	စွန့်စားရမှုအခွင့်အလမ်းကို	ထိန်းချုပ်ကြီးကြပ်ခြင်း Risk Management for Loss Control
တိုင်းရင်းဆေးကို	ခေတ်မစက်ှီ ဖြင့်	ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်ကို	…	လိုက်ပါလေ့လာကြည့်ခြင်း	အွားရ်အန်အိုဆွတ်	စက်ရုံ Ouay Un Osoth, Modern Medicine Manufacturing
မဟာသတင်းအချက်အလက်	Big	Data	ကို	လက်ခံရန်	အသင့်ပြင်ဆင်ထားခြင်း Prepare for Big Data!
စက်မှုလုပ်ငန်း၌	မော်တာအမျုးအစားများအသီိးသီးနှင့်	သုံးစွရန်ဲAC	Adjustable	Speed	Drives	ကို	ရွေးချယ်ခြင်း Choosing AC Adjustable Speed Drive for Motor in Manufacturing Works
6 MODERN MANUFACTURING MYANMAR EDITION
(2016) ခုနှစ်နှောင်းပိုင်း၌ စောင့်ကြည့်သင့်သည့် စက်မှုလုပ်ငန်းကိရိယာပစ္စည်းနှင့် နည်းပညာဆန်းသစ်တီထွင်မှုပြပွဲပြီးခဲ့သည့် (2016)ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းနေရာအသီးသီး၌ စက်မှုလုပ်ငန်းကိရိယာပစ္စည်းနှင့် နည်းပညာ ဆန်းသစ်တီထွင်မှုပြပွဲများ ပြုလု ပ် ကျင်း ပခဲ့ြ ကသည့် ကာလဟု ဆိုနို င် ပါသည် ။ ဤပြပွဲ များနှ င့် စပ် လျဉ်း ၍ Modern Manufacturing Myanmar Edition မဂ္ဂ ဇ င်း မှေ န၍ မြန်မာစာဖတ်သူများအတွက် အောက်ပါပြပွဲများ (4)ပွဲမှ လှုပ်ရှားမှုဓာတ်ပုံများကို ဖော်ပြ ပေးလိုက်ပါသည်။
2016 Taiwan Int’l PhotovoltaicExhibition: PVTaiwan သည် ထိုင်ဝမ်နုင်ိငံ ထိုင်ပေမြို့တော် Taipei Nangang Exhibition Center, Hall 1 ၌ ကျင်းပပြုလုပ်သော ဆိုလာဆဲလ်စွမ်းအင်ပြပွဲဖြစ်ပြီး၊ ပြပွ၌ဲ ပါဝင်ပြသသည့်အကြောင်းရပ်များမှာ PV Materials & Silicon Wafers / Ingots, Solar Cells / PV Modules / BIPV, PV Power Generator Systems / HCPV / DSSC, Processing Equipment, Evaluation / Testing / Analysis, Solar Application Products, Storage Batteries / Systems, Solar Thermal Products / Systems တို့ ဖြစ်သည်။
Taiwan International Green Industry Show: TiGiS သည် ထို င် ၀ မ် နိုင် ငံ ထို င်ပေမြို့တော် Taipei Nangang Exhibition Center, Hall 1 ၌ ကျင်းပပြုလုပ်သော စက်မှုလုပ်ငန်းနည်း ပညာပြပွဖြစ်ဲပြီး၊ အဆိုပါပြပွ၏ဲခင်းကျင်းပြသမှု ပင်မအတွေးအခေါ်မှာ with အဓိကခေါင်းစဉ်မှာ Clean Energy, Green Environment, Water Technology, Green City & Green Living Product ဖြစ်သည်။
7 JANUARY - MARCH 2017
Intermach & Subcon Myanmar 2016 သည် 20 – 22 အောက်တိုဘာ 2016 အတွင်း ကျင်းပပြုလုပ်သော မြန် မာနို င် ငံ ၏ စက် မှု လု ပ် င န်း စက် ယန္တ ရားဆို င် ရာ အကြီး စားပြပွဲြ ကီး ဒ ဖြစ်၍၊ ထိုင်း မြန်မာ တရုတ် စသည့် နိုင်ငံအသီးသီးမှ လုပ်ငန်းရှင်များသည် မိမတိ၏့ို မြောက်မြားစွာသော စက်ယန္တရားနှင့် ကိရယိာတန်ဆာပလာများကို ဆောင်ယူပြသခြင်းအပြင်၊ ထိုင်းနိုင်ငံ၏ BOI ခေါ် ထိုင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော် မတီ၏ အားပေးမှုဖြင့် ထိုင်းလုပ်ငန်းရှင်များ၏ ဖောက်သည်အသစ်မိတ် ဆက်ရှာဖွေမှုပြပွဲရုံများလည်း ပါဝင်သည်။
30.BI-MU and SFORTEC INDUSTRY သည် UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE, the Ministry of the Economic Development ၏ အားပေးထောက်ပံ့မှုဖြင့် EFIM-ENTE FIERE ITALIANE MACCHINE မှ ကျင်းပပြုလုပ်သော စက်ယန္တရား စက်ရုပ်၊ သက်ဆိုင်ရာအော်တိုမေးရှင်းစနစ်နှင့် နည်းပညာများပြပွဲဖြစ်သည်။
8 MODERN MANUFACTURING MYANMAR EDITION
4th Medical Myanmar 2016 သည် 19 – 23 အောက်တိုဘာ 2016 ၌ ကျင်းပပြုလုပ်သော မြန်မာနိုင်ငံဆေးရုံ ဆေးခန်းများ သုံးဆေးဝါးပစ္စ ည်းနှ င့်ဆေးကိ ရိယာပစ္စ ည်းများပြပွဲဖြစ် ပြီး၊ ပြပွ၌ဲ လူနာကုသစောင့်ရှောက်မှုကုတင်၊ သွားဆရာဝန်သုံး ကိရိယာ ပစ္စည်းများအပြင် အခြားရောဂါစစ်ဆေးကုသမှု ကိရိယာပစ္စည်းများ ပါဝင်ပြသထားပြီး၊ ဤနှစ်ပြပွတွဲင် တရုတ်နုင်ိငံမှ ဆိုင်ရာကုန်ပစ္စည်း ထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးသူလုပ်ငန်းရှင်အမြောက်အမြားမှ လည်း စိတ်ဝင်တစား ပါဝင်လာကြသည်။
တရုတ်မှ အမေရိကန်နုင်ိငံ၏ နောက်ဖေးဖက်ကို ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်ခြင်း! အမေရိကန်နုင်ိငံ၏ သမ္မတသစ်ဖြစ်လာမည့် Donald Trump ၏ မူဝါဒအယူအဆသစ်အရ အမေရိကန်နုင်ိငံတွင်းမှ နိုင် ငံြ ခားသား အလု ပ် သ မားများအား နေရင်းနိုင် ငံ သို့  ဖိ အားပေးပြန် သွားစေမည့် ၎င်း၏ကြေငြာချက်နောက် ပို င်းတရုတ်ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံ၏ သမ္မတ Xi Jinping သည် လက်တင်အမေရိကနိုင်ငံအုပ်စုများနှင့် ဆက်ဆံရေးတိုးမြှင့်ရန် ဆောင်ရွက်လာခဲ့ပြီး၊ တရုတ်နုင်ိငံမှနေ၍ Peru အပါအ၀င် Ecuador နှင့် Chile နိုင်ငံများအား အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း AP Photo_Andy Wong
10,000 တန်ဖိုးရှိသော နိုင်ငံ၏ အခြေခံပြည်သူ့ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများနှင့် စွမ်းအင်လုပ်ငန်းများ ဖွ့ဖြိုံးတည်ဆောက်မှု၌ ကူညီရန် ကမ်းလှမ်းဆွေးနွေးမှု ပြုခဲ့ပါသည်။ အမေရိကန်နုင်ိငံ၏ သမ္မတရွေးကောက်ပရလဒသည်ွဲ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှ လူအများကို အလေးထား စိုးရိမ်စေသည့် အချက်ြ ကီးဖြစ် လာခဲ့ ပါသည် ။ အထူးသဖြင့် ‘America First’ မူ ၀ါဒကြောင့် စက် မှုလု ပ် င န်းရင်းနှ မြှုံပ်နှ မှုံ လု ပ် င န်းပို င်းနှ င့် စပ် လျဉ်း၍ စိုးရိ မ် စ ရာများ ဖြစ် လာခဲ့ ပါသည် ။ ဤတစ်ြ ကိ မ် လက် တ င် အ မေရိ က နိုင် ငံ များနှ င့် တရု တ် ၏ ချစ်ကြည်ရေးကမ်းလှမ်း မှုကြောင့် အမေရိကန်နငို င်ံ အနေဖြင့် မိမ၏ိဆိငုရ်ာမူဝါဒများချမှတရ်ာ၌ အလေးထားသတိပြုလုပ်ေဆာင်ရန် ဖြစ်လာစေပါသည်။ အကယ်၍ အဆိပုါ ထုတလ်ပုမ်ှု အင်အားကြီးမားသည့်နုင်ိငံတို့သည် ဖွ့ဖြိုံးတိုးတက်လာပြီး မိမိ၏ ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်ကို တိုးမြှင့်လာနိုင်ပါက အမေရိကန်တွင်းရှိ လုပ်သားများကို နေရင်းနိုင်ငံသို့ ပြန်သွားစေရန် အကြောင်းခံ ဖြစ်လာစေပါမည်။ ဆိုလိုသည်မှာ အမေရိကန်နုင်ိငံ အနေနှင့် မိမိကိုယ်နှင့် အနီးကပ်၌ စွမ်းအားကြီးသည့်ပြိုင်ဖက် ရှိလာအောင် လုပ်ဆောင်သကဲ့သို့ ဖြစ်စေပါမည်။ Source: https://goo.gl/URaQ37
OPEC နှင့် ၎င်း၏ထုတ်လုပ်မှုအင်အားလျှော့ချရေးမူဝါဒ (8)နှ စ် တာကာလအတွ င်းပထမဆုံးအကြိ မ် အ ဖြစ် OPEC မှ မိ မိ ၏ ထု တ် လု ပ် မှုအ င် အားကို လျှော့ ချရန် အတည်ပြုဆံုး ဖြတ်ချက် ရရိခြှဲ့ ပီး၊ ၎င်းသည် (90)ခုနစှတ်ာကာလများမှစ၍ OPEC မှနေ၍ အဖွဝ့ဲင်ပြင်ပနိုငင်မျာံးဖြစ်သော ရုရှား၊ ကာဇတ်စတန်၊ အိုမန်၊ ဘာရိန်း၊ ကိုလံဘီယာ၊ ကွန်ဂို၊ အီဂျစ်၊ ထရီနီဒက်နှင့်တိုဘာကို၊ တာ့ခ်မင်နီစတန်၊ အဇာဘိငုဂ်ျန်နငှ့် ဘရူနငိုး နိငုင်မျာံးကို ထုတလ်ပုမ်အှုင်အား လျှော့ချကြရန် အစည်းအဝေးခေါ်ယူညနှိ ငှိုး လာခဲသ့ည်မစှ၍ ပထမဆံုး အကြိမအ်ဖြစ် Austria နိငုင်ံ Vienna မြို့၌ကျင်းပသော ယခုအစည်းအဝေးတွင် အများသဘောတူဆုးံ ဖြတ်ချက် ရရှိနုင်ိခြင်းလည်း ဖြစ်သည်။ OPEC ၏ ရုတ်ချည်းထုတ်လုပ်မှုအင်အားလျှော့ချမှုကြောင့် ရေနံဈေးနှုန်းကို 18% တိုးမြှင့်လာစေပါသည်။ ထို့အပြင် အိုပက်သည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရေနံစိမ်းထုတ်လုပ်မှုအင်အား၏ 20% အထိရှေိသာ အခြားအိုပက်ပြင်ပအုပ်စုနိုင်ငံများကိုလည်း ထုတ်လုပ်မှုအင်အားလျှော့ချရေးစည်းဝေးပွ၌ဲ ညှိနှုငိ်းဆွေးနွေးမှုပြုရန် ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပါသည်။ Source: https://goo.gl/SoGqWU
9 JANUARY - MARCH 2017
เรื่อง: สุริยันต์ เทียมเพ็ชร์ (Dipl.-Ing.Suriyan Tiampet)
ရော်ဘာရွှေခေတ် ကုန်ပြီ ရွှေထည်များ ရောင်းဖို့ အချိန်ရောက်လာပြီ Process Rubber, The Rise of the Golden Age
ရော်ဘာဈေးနှုန်း ပြဿနာသည် လူအများအတွက် စီးပွားရေးပြဿနာနှင့် နိငုင်ေံရး၏
ဒေသတိုင်း၌ အံ့ဖွယ်အပင် ဖြစ်လာကြောင်း သင်တို့ သိလိုကြပါမည်။ အထူးသဖြင့်
၀င်ရောက်စွက်ဖက်မှုမှ ပြဿနာဟု မြင်ကောင်း မြင်မိပါမည်။ မက်ခရိုပိုင်းအမြင်ဖြင့်
ရော် ဘာကစားစရာအရု ပ်နှ င့် ဆေးဝါးကိ ရိ ယာပစ္စ ည်းများ ထု တ် လု ပ် မှုအ ပို င်း၌
ကြည့်ပါမူ ရော်ဘာသည် တစ်ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာဖြင့် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ဂေဟစနစ်
လူလုပ်ရော်ဘာများနှင့် မယှဉ်ပြိုင်နုင်ိသော သဘာဝရော်ဘာ၏ အနေအထားကြောင့်
ပျက်ဆီး စေမှု အကြောင်းခံတစ်ရပ်ဟု ဆိပုါသည်။ အမေဇြုံ မစ်ဝမှ်း ရှိ အပူပငိုး မိုး သစ်တော၌
အနာဂတ် တွင် ကမ္ဘာြ ကီးမှ ရော် ဘာပင် ကို အသုံးချရန် လို အ ပ်နေသေးသလား
ပေါက်ရောက်သော ရော်ဘာပင်သည် အဘယ်ကြောင့် အီကွေတာမျဉ်းအနီးအနားရှိ
ဆိုသည်မှာ မေးစရာပင် ဖြစ်ပါသည်။
ရော်ဘာပင် (HEVEA BRASILIENSIS) ပေါက်ရောက်ရာဒေသများ - ရော်ဘာပင်သည် ပူနွေး၍ မိုးများသော ရာသီဥတု အထူးသဖြင့် အီကွေတာရပ်ဝန်းဒေသများဖြစ်သော မြန်မာ ထိုင်း အင်ဒိုနီးရှား မလေးရှားနှင့် ၎င်း၏ မူလ ပေါက်ရောက်ရာဒေသဖြစ်သော တောင်အမေရိကတိုက်ရှိ အမေဇုံမြစ်ဝှမ်း ဒေသများ၌ ရှင်သန်ပေါက်ရောက်သည်။ ရော်ဘာအသုံးချမှု၏ အစဦးပိုင်းကာလတွင် ၎င်းကို လူ့အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ ဥပမာ ဖိနပ်၊ အပေါ်ရုံခြုံထည် စသဖြင့် ပြုလုပ်သုံးစွကြပြီဲး၊ ရော်ဘာကုန်ပစ္စည်းသုံးစွမှဲု အစဦးပိုင်းကာလတွင် နွေရာသီရောက်၍ အပူနှင့် ထိတွေ့သည့် အခါ ရော်ဘာပျော်သည့်ပြဿနာနှင့် ရာသီဥတု အေးလာသည့်အခါ ကျု့ဆန်ံ့မှုအား ဆုံးရှုံးသွားသည့် ပြဿနာကို ကြုံတွေ့နေရသေးသည်။ သို့ရာတွင် (1840)ခုနှစ် သို့မဟုတ် လွန်ခဲ့သော (176)နှစ်ခန့်တွင် အမေရိကန်နုင်ိငံသား တီထွင်သူတစ်ဦးမှ အပူနှင့် အအေးဒဏ် ရာသီဥတုအောက်၌ ရော်ဘာအား တည်မြဲနေနိုင်သည့်နည်းလမ်းကို တွေ့ရှိသည့်အချန်ိ မှစ၍ သဘာဝရော်ဘာအသုံးတွင်ကျယ်မှုမှာ ရေလွှတ်တံခါးမှ ရေများဒလဟော စီးထွက်လာသကဲ့သို့ပင် ဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင် ရော်ဘာသည် လွန်ခဲ့သောနှစ် (150) အတွင်း စက်မှုလုပ်ငန်း တိုးတက်ဖွ့ဖြိုံးလာမှု အကြောင်းခံ (3)ရပ်ထဲမှ တစ်ခုလည်း ဖြစ်သည်။ ထိုခေတ်တွင် လိုအပ်သော ပင်မကုန်ကြမ်းပစ္စည်း (3)မျုးမှိာ အစိတ်အပိုင်းများ ထုတ်လုပ်ရန်အတွက် သံမဏိ၊ စွမ်းအင်အဖြစ် သုံးစွရန်ဲရုပ်ကြွင်းလောင်စာ နှင့် လှုပ်ရှားရသည့်အစိတ်အပိုင်းများကို ချတ်ိဆက် ကာကွယ်ရာ၌သုံး ရော်ဘာတို့ ဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့် ရော်ဘာကို ပူလီကြိုးအဖြစ် သုံးခြင်း၊ ယိုစိမ့်ခံ အွုင်ိးဆီးလ်အဖြစ် သုံးခြင်း၊ ပုံစံမျုးစိုံ ကွေးညွှတ်နုင်ိသော ရော်ဘာပိုက်လုံးအဖြစ် သုံးခြင်း အစရှိသည်တို့ ဖြစ်သည်။ ယနေ့ခေတ် ကမ္ဘာကြီးတွင် ရော်ဘာစိုက်သည့်နုင်ိငံ အနည်းငယ်သာ ရှိ၍၊ အာရှတိုက်သည် ရော်ဘာစိုက်ပျုးမှို၏ 92% အထိနှင့် အာဖရိကတိုက်မှ 5% အမေရိက်တိုက်၌ 3% စီ ရှိကြသည်။
10 MODERN MANUFACTURING MYANMAR EDITION
ALTERNATIVE ENERGY ရော်ဘာ၏ မှတသ်ားစရာအတိတ် - ဤအံစ့ရာရော်ဘာပင်နငှ့် စပ်လျဉ်း၍ ယနေ့ခေတ်၌ ရော်ဘာဟု ဆိလုကို ပ်ါက လူအများသည် လူလပုေ်ရ်ာဘာတုကသိုာစဉ်းစားမိကြပါမည်၊ အမှ န် အားဖြင့် ဤကမ္ဘာြ ကီး၌ သုံးစွ နေသည်ဲ့ ရော် ဘာ၏ 40% မှာအပင် မှလာပြီး၊ ၎င်းတို့  ထဲ မှအများစု မှာ ရော် ဘာပင် မှရပါသည် ။ သို့ြ ဖစ် ပါ၍ ဤအံ့ ဖွယ် အ ပင် ၏ ရွှေရောင်တောက်ပခဲ့သော အတိတ်ကာလနှင့် ကျဆင်းနေသော ယနေ့ခေတ်အခြေအနေကို သင်ခန်းစာယူဖွယ် အောက်ပါအတိုင်း တင်ပြလိုက်ရပါသည်။
1910 1) (1910) ခုနှစ် - ဘရာဇီးနိုင်ငံသားများ၏ ကြွယ်ဝချမ်းသာမှုကို ဆောင်ကျဉ်းပေးခဲ့သည့် ဘရာဇီးနိုင်ငံ၏ အံ့ဖွယ် သစ်ပင်ပေါင်း သန်း(50)ကျော်သည် တောင်အမေရိကတိကုမ်ှ အာရှတကို သ့်ို ဆောင်ယခူရီးနှငခ်ရံလျက် စိကုပ်ျုးစေခဲိပ့ါသည်။ ထိမုနှစှမ်ျားမကြာမီမှာ ပင် အာရှဒေသမှ ရော်ဘာသည် ကမ္ဘာေ့  ရ်ာဘာဈေးကွကသ့်ို စီးဝင် ရောက်ရှလိာပြီး၊ ဘရာဇီးရော်ဘာဈေးနှုန်းကို ထိုးဆင်းကျသွားစေကာ၊ လပိုင်းအတွင်းမှာပင် ရော်ဘာဈေးကွက်ကို ထိတ်လန့်စဖွယ် ပြိုလဲသွားစေပါသည်။ ဘရာဇီးရော်ဘာခြံရငှမ်ျားမှ ၎င်းဖြစ်ရပ်ကြောင့် အာရှနုငိင်သာံးများကို အထူးစိတဆ်ိးု သွားသည်တ့ငိုေ် အာင် အခြေအနေကို ပြောင်းလဲပစ်ရန် မည်သမ့ှိုတတ်နုငိေ်တာ့မည် မဟုတ်တော့ပါ။
1935 2) (1935) ခုနှစ် - အမေရိကန်မဟာသူဌေးကြီးတစ်ဦးမှ ဂျော်ဂျယာပြည်ီနယ်ပမာဏ၏ တစ်ဝက်ခန့်ရှေိသာ ရော်ဘာခင်းကို တည်ထောင်စိုက်ပျုးခဲိ့သော်လည်း လများမကြာမီပင် စိုက်ခင်းရှိ ရော်ဘာပင်များ သေဆုံးကုန်သည်ကို တွေ့ရသည်။ ဤဖြစ်ရပ်သည် ရော်ဘာပင်နှင့် မသင့်လျော်သော ဒေသရေမြေအခြေအနေဖြစ်သည့် အစိုဓာတ်နှင့် သဲဆန်လွန်းသည့် မြေသားတို့ကြောင့် ဖြစ်ခဲ့သည့် ဂေဟစနစ်၏ကြီးမားသည့် ကပ်ဘေးနှင့် စီးပွားရေးပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုဟု ဆိုနုင်ိပါသည်။
1983 3) ကမ္ဘာြ ကီး၏ သဘာဝရော် ဘာစေးရည် ထု တ် လု ပ် မှုသ ည် (1983)ခုနှ စ် တွင် တန် ချန်ိ ( 4)သန်းသာ ရှ ရာမှိယနေ့ အ ချ န်ိ တွင် တန် ချန်ိ ( 12)သန်းသို့  တိုးမြှ င့်ရောက် ရှိ လာပါသည် ။ ဤအတွ က် အရှေ့  တောင် အာရှ နိုင် ငံ များ (သို့  ) အာဆီ ယံ နိုင် ငံ သားများသည် (46,600) စတု ရ န်းကီ လို မီ တာအကျယ် ရှိသော သစ်တောနေရာကို ခုတထ်ငွရ်ငှ်း လင်းပြီး စိကုပ်ျုးရမှိုကြောင့် ဒေသဂေဟဗေဒစနစ်၏ အခြေခံလပုေ်ဆာင်မကှုို သက်ရောက်ထခိကိုန် ငိုေ် စပြီး ဂေဟစနစ်နငှ့် ဇီဝမျုးကွိများ၏ဲဖြစ်တည်မှုကို ခြိမ်းခြောက်လာမှုအပြင် နောက်ဆက်တအကျွဲုးဆက်ိအဖြစ် အပင်တစ်မျုးတည်ိး စိုက်ပျုးမှို(Monoculture) ပြဿနာများကိုပါ ဖြစ်ထွန်းလာစေပါမည်။
2015 4) ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ယခင်ခေတ်ကောင်းစဉ်က တစ်ကီလို ဘတ်(100) အထိရှိခဲ့သော ရော်ဘာဈေးနှုန်းသည် (2015)ခုနှစ်တွင် ရော်ဘာ(4)ကီလိုဂရမ်လျင် ငွေဘတ်(100) သာရှိေသာ ဈေးနှုန်း သို့ ကျဆင်းလာခြင်းခြင်းကြောင့် ရော်ဘာခြံသမားများ၏ ဆန္ဒပြမှုနငှ့် ကြုံ့တွေခ့  ရဲ့ သည်။ ဒါသည် သမိငုး တစ်ပတ်လည်လာခြင်းလား သိမ့ု ဟုတ် ၀ဋ္ဋ်ကြွေးကုသလို က်ေံလလား။ ဒီအတိငုး ဆက်သွားမလား ဒါမှမဟုတ် ကျန်ထဘူရ၏ီမြေတွင်း မှကျောက်မျက်ရွှေခေတ် ကုနဆ်ုးံ သွားသော်လည်း ယနေ့အချန်ိ တငွ် ကျန်ထဘူရီခရိုင်သည် ကျောက်မျက်ဈေးကွက် ဗဟိုဖြစ်နေသေးအောင် လုပ်ဆောင်နုင်ိခဲ့သကဲ့သို့ ထိုင်းနိုင်ငံအတွက် ရော်ဘာစိမ်းမှ တန်ဖိုး (10)ဆကျော်အထိ တိုးမြှင့်လာနိုင်သည့် တစ်ဆင့်မြှင့်ကုန်ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်ဖို့ နည်းပညာတိုးတက်တီထွင်မှုများ ပြုလုပ်ရန် အချန်ိ ကျရောက်လာပြန်ပြီလား။
ရော်ဘာဈေးနှုန်း ယခုလို အပြောင်းအလဲ ဖြစ်ရမှု၏ အဓိကအကြောင်းရင်းမှာဈေး ကွက် တွင်း၌
ေ ရာ် ဘာ
လို အ ပ် ချက်
ေ လျာ့ ကျလြာ ခ င်းနှင့်
ကမ္ဘာ့ ရေနံဈေးကျဆင်းမှုကြောင့် ရေနံ စိ မ်းမှ ဘေးထွ က် ပ စ္စ ည်းအဖြစ် ရရှိ သ ည့် လူလပုေ်ရ်ာဘာ ဈေးချုလာခြင်ိးကြောင့် ဖြစ်သည်။ သေချာသည်နေ့ာက်တစ်ချက်မှာ လည်း အာဆီ ယံ နု ငိ် ငံ သားတို့  အနေဖြင့် အလွ န် အ မင်းချမ်းသာလာရန် မျှော် မှန်းချက်ြ ဖင့် ရော် ဘာကို စုြ ပုံစို က် လာခြင်းကြောင့် လ ည်းဖြစ် သ ည် ။ သို့  မ ဟု တ် ပါကလည်းရော်ဘာပင်ကို ယခင်ကလို အမေဇုံမြစ်ဝှမ်း၏ မိုးသစ်တောသာမက အာဆီယံနုင်ိငံ၏ ဒေသ အားလုံးလိုလို၌ စိုက်ပျုးအောင်ိမြင်နု င်ိအောင် လေ့လာသုတေသနပြုခဲ့သည့် တရု တ်သိပ္ပပညာရှံင်များကိုပင် အပြစ်ဆို ရမလား။ ယခင်ကဆိုသော် ထိုင်းမြေပုံ၏ ပုဆိန်လက်ကိုင်ရုိး အဖျားဒေသ၊ မလေးရှားနှင့် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံတို့၌သာ ရော်ဘာကို စို က် ပျိုးနို င်သော် လ ည်းယနေ့ ခေ တ် တွင် ၎င်း ကို ထို င်းနို င် ငံ ၏ဒေ သ တို င်း၌ စို က် ပျိုးနို င် သ ည့် အ ပြင် ထို င်း၏ အိ မ် နီးချင်းနို င် ငံ များဖြစ်သော ကမ် ပူးချားနှ င့် မြန်မာတို့တွင်ပါ စိုက်ပျုးနေပြီိဖြစ်သည်။ ယခုအခါ၌ အာဆီယံအတွင်းနှင့် ကမ္ဘာကြီး၏ ရော်ဘာစိုက်ပျုးမှိုအများဆုံးနိုင်ငံမှာ အင်ဒိုနီးရှား ဖြစ်သည်။ လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်းများစွာအတွင်း ကမ္ဘာကြီး၏ ရော်ဘာစိုက်ပျုးထိုတ်လုပ်မှု ဧရိယာသည် တစ်ဖြည်းဖြည်း မြင့်တက်လာခဲ့ပြီး၊ (2011)ခုနှစ်တွင် စိုက်ပျုးဧရိယာ ရိုင်း (73.14)သန်းမှ (2015)ခုနစှတ်ွင် စိကုပ်ျုးဧရိယာ ရိုင်း (77.60) သန်းသို့ တိုး လာခြဲ့ ပီး၊ ကမ္ဘာေ့  ရ်ာဘာအထွကန်နှုး မှာ (2011)နှစဆ်န်း၌ တန်ချန်ိ (11.28)သန်းမှ (2015)ခုနစှတ်ငွ် တန်ချန်ိ (12)သန်းသို့ တိုးလာခဲ့ပါသည်။ ရော်ဘာဈေးနှုန်း မြင့်တက်လာသည့် (2004) ခုနှစ်မှစ၍ ရော်ဘာစိုက်ဧရိယာ တိုးချ့စိဲုက်ပျုးစေရန်ိဆွဆောင်ဲသကဲ့သို့ ဖြစ်လာပြီး၊
11 JANUARY - MARCH 2017
ALTERNATIVE ENERGY ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး ရော်ဘာစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုနုင်ိငံ (3)နိုင်ငံ ဖြစ်သော ထိုင်း အင်ဒိုနီးရှား
တန်ချန်ိ (1.03)သန်း မှ (2015)ခုနှစ်တွင် တန်ချန်ိ (0.91)သန်းသာ ကျန်ရှေိတာ့သော
မလေးရှား သုံးနိုင်ငံပေါင်းသည် စိုက်ပျုးမှိုဧရိယာ ရုငိ်း(46.50)သန်း ရာနှုန်းအားဖြင့်
အမေရိ က န် နု ငိ် ငံ ၊
ကမ္ဘာ့ရော်ဘာစိုက်ပျုးဧရိယာ၏ (59.92)% ရှိပြီး၊ စုစုပေါင်း အထွက်နှုန်းမှာ တန်ချန်ိ
တန် ချန်ိ ( 0.70)သန်းသို့  ကျဆင်းသွားသော ဂျပန် နိုင် ငံ တို့ နှ င့် ဆန့်  ကျင် စွာ ပင်
အိန္ဒယိရော်ဘာအသုံးမှာမူ (2011) ခုနှစ်တွင် တန်ချန်ိ (0.96)သန်း မှ (2015)ခုနှစ်တွင်
(2011) ခုနှ စ် တွင် တန် ချန်ိ (0.77)သန်းမှ (2015)ခုနှ စ် တွင်
တစ် ဖ က် ၌ မူ ဥရောပနှ င့် ဂျပန် နိုင် ငံ များနှ င့် ဆန့်  ကျင် စွာ ပင် တရု တ် နိုင် ငံ ၏
တန် ချန်ိ (1.05)သန်းသို့  တိုးလာပါသည် ။ ဖော်ြ ပပါအချက် များကြောင့် ရော် ဘာ
ရော်ဘာသုံးစွမှဲု လိုအပ်ချက်မှာ တိုးမြင့်လာခဲ့ပါသည်။ စဉ်ဆက်မပြတ် စီးပွားရေးနှင့်
ထုတ်လုပ်သူများသည် တရုတ်နုင်ိငံကို ပိုမိုမခှီုလာရပါသည်။ ကမ္ဘာ့ရော်ဘာတင်ပို့မှုမှာ
စက်မှုလုပ်ငန်းတို့ တိုးတက်ကြီးထွားလာမှုကြောင့် ပြီးခဲ့သော (5)နှစ်တာကာလအတွင်း
တစ်နှစ်လျင် (5.45) ရာနှုန်းဖြင့် တိုးလျက်ရြှိ ပီး၊ (2015) ခုနှစ်တွင် ထိုင်းနိုင်ငံသည်
တရုတ်နုင်ိငံ၏ ရော်ဘာအသုံးလိုအပ်ချက်သည် (2011) ခုနှစ်တွင် တန်ချန်ိ (3.6)
ရော်ဘာတင်ပို့မှု တန်ချန်ိ (3.70)သန်းဖြင့် ပထမ၊ အင်ဒိုနီးရှားသည် ရော်ဘာတင်ပို့မှု
သန်း မှ (2015)ခုနှစ်တွင် တန်ချန်ိ (5.00)သန်းသို့ တိုးလာပါသည်။ ဥရောပဖက်၌မူ
တန်ချန်ိ (2.70)သန်းဖြင့် ဒုတယိ၊ မလေးရှားနိုငင်သံည် ရော်ဘာတင်ပမ့ှိုတန်ချန်ိ (1.26)
(2011) ခုနှစ်တွင် တန်ချန်ိ (1.24)သန်း မှ (2015)ခုနှစ်တွင် တန်ချန်ိ (1.13)သန်းသို့
သန်းဖြင့် တတိယနှင့် ဗီယက်နမ်နုင်ိငံသည် ရော်ဘာတင်ပို့မှု တန်ချန်ိ (1.00)သန်းဖြင့်
ရော်ဘာသုံးစွမှဲု ကျဆင်းသွားပါသည်။ အလားတူပင် ရော်ဘာသုံးစွမှဲု (2011) ခုနှစ်တွင်
ထိုင်းနိုင်ငံအနေဖြင့် ရော်ဘာထုတ်လုပ်မှု၌ (2015)ခုနှစ်တွင် ရော်ဘာအစေးခြစ်ဧရိယာ ရိုင်း(18.85) သန်း တိုးမြှင့်သုံးစွပြီဲး၊ အထွက်ပမာဏမှာ တန်ချန်ိ (4.42)သန်းသို့ တိုးလာသော်လည်း၊ အထွက်နှုန်းမှာမူ တစ်ရုငိ်းလျင် (237) ကီလိုသို့ ကျဆင်းသွားပါသည်။ အစိုးရ၏ ရော်ဘာတိုးမြင့်စိုက်ပျုးရေးအထောက်ိအ ကူမူဝါဒကြောင့် လက်ရှတွိင် ထိုင်းနိုင်ငံသည် လက်ရှ၌ိကမ္ဘာ့နံပတ်(2) စိုက်ပျုးဧရိယာအများဆုံးနိုင်ငံဖြစ် ပြီး၊ အထွက်ပမာဏအားဖြင့်မူ ကမ္ဘာ့ အများဆုံး ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် တာယာဘီးနှင့် ရော်ဘာလက်အိတ် ထုတလ်ပုမ်လှုပုင်န်း အစရိသှည့် နိငုင်ြံ ခားမှ စက်မလှုပုင်န်းအခြေစိကုတ်ိးု ချ့လာမှဲုကြောင့် ပြည်တငွ်း ရော်ဘာ အသုံးလိုအပ်ချက်မှာလည်း (2015)ခုနှစ်တွင် တန်ချန်ိ (582,000) သို့ တိုးလာသလို၊ တရုတ်နှင့် အိန္ဒယိ၏ တိုး မြှငလ့်ာသော ရော်ဘာသံုး စွမှဲု လအို ပ်ချက်အရ ထိငုး နိုငင်၏ံရော်ဘာတင်ပမ့ို မှုာ လည်း တန်ချန်ိ (3.70) သန်းသို့ တက်လာပြီး၊ ရော်ဘာတံုး တင်ပမ့ို မှုာ လည်း ဈေးကွကလ်အို ပ်ချက် နှငအ့် ညီ တစ်နစှ် (7.91)ရာနှုန်း တိုးမြင့်လာမည့် အလားအလာ ရှိပါသည်။
အခါမှာ၎င်းကို အသုံးချပြီးပရိဘောဂနှ င့် အသုံးအဆောင် မျုးစိုံ နီးပါးလောက် ကို
မ ည် သို့  ပ င်ြ ဖ စ်စေ အ ထ က် ပါအ ချက် များေြ ကာင့် ကျွ န်ု ပ် တို့  အနေြ ဖ င့်
ထုတ်လုပ်နုင်ိပါသေးတယ်။
အာဆီ ယံရော် ဘာစို က်တောင် သူ များကို အပြစ် မ ဆို အ ပ်ပေ။ ၎င်းတို့  အ တွ က် မူ
အဆုံးမှာတောင် ကျောက်မီးသွေးအစား လျှပ်စစ်ထုတ်ဖို့ ထင်းလောင်စာအဖြစ်
အချ န်ိ ကာလအတန်ြ ကာ ဆင်းရဲ လာခဲ့ြ ပီးမှ ယနေ့ အ ချ န်ိ တွင် အကြွေးသံ သ ရာမှ လွတ်ကင်းပြီး၊ ချမ်းသာမှုတည်ဆောက်ပေးနိုင်မည့် မော်ကြွားစရာ အပင်ရှိလာခြင်း
သုံးနိုင် ပါသေးတယ် ။
ဖြစ် သ ည် ။ ဂေဟစနစ် ၏ ကပ် ဆိုးလက္ခ ဏာဖြစ်သော ပစ် က ပ် ကားများကို ၎င်းတို့ 
အစိတအ်ပိငုး တစ်ခအုဖြစ်ကို ရောက်ရသွှိားပါပြီ။ လမ်းခင်းခြင်း၊ တာယာဘီးများအသီးသီး၊
ရော် ဘာစေးရည် က တော့ နေ့ စ ဉ် ဘ ၀သုံးကု န် ပ စ္စ ည်းတွေ ရဲ့ 
၀ယ် ယူ နိုင်တော့ မ ည် ဖြစ် သ ည် ။ ပစ် က ပ် ကား၏ ကားဘီးဆို သ ည် မှာ ၎င်းတို့  ကို
အိမ်တွင်း အသုံးအဆောင်များမှ ကွန်ဒုံးအထိပါပဲ။ ပြိုင်ဖက်အဖြစ် လူလုပ်ရော်ဘာတွေ
အခုကြွယ၀်မှုနေ့ရက်များကို ရရှိေစသော ထုတက်နုပ်စ္စည်း ၏ ရရလဒ်ပင် မဟုတပ်ါလော။
ရှိလာသည့်တိုင်အောင် သဘာဝရော်ဘာဟာ လူလုပ်ရော်ဘာတုထက် ပိုမိုပြီး ကြံ့ခိုင်မှု၊ ပိုမိုတဲ့ကျု့ဆန်ံ့မှုနှင့် တုန်ခါမှုကို ပိုကောင်းစွာ ခံနုင်ိစွမ်း ရှိပါတယ်။
… ရော်ဘာလိေ့ု ခ်ါတဲ့ ဒီအဖံ့ ယွအ်ပင်ဟာ အသက်ကိးု ခုကြောင်ကသဲ့ ပ့ို င် ရှညြ် ကာတဲ့ ဇီဝသက်တမ်းကြော ရှိပါသည်။ အစိုးရလုပ်ပိုင်ခွင့် ရလာတာနှင့်မခြား ရော်ဘာပင်ဟာ
… ရွှေစင်တုံးကိုယူပြီး တန်ဖိုးတိုးရွှေထည်အဖြစ် ထုတ်လုပ်သလိုမျုိး ရော်ဘာကို
အရွယ်ရောက်လာတာနှင့် အနှစ် (20) ကာလ တစ်လျှောက်လုံး ရော်ဘာစေးရည်ကို
ကုန်ကြမ်းအဖြစ် ရောင်းရာကနေ ၎င်းကို ဆောင်ယူကုန်ချောထုတ်လုပ်ပြီး ရောင်းချဖို့
မြ ပ တ်ပေးနို င် သ လို ၊ အို မ င်းလာလို့ ရော် ဘာေ စးရ ည် သိ ပ် မ ထွက်တော့ တဲ့
ထိုင်းနိုင်ငံအတွက် အချန်ိ ကျရောက်လာပါပြီ။
EXECUTIVE SUMMARY Para rubber tree is an economic plant for the country that located near equator zone. This kind of tree might see asathreat for environment and ecology of the world while it could be processed and use in many businesses. The Para rubber could produce latex continuously for 20 years and when it became too old, it can be processed into furniture or another consumer product. At least, it could be used asafuel instead of flint. The latex could use asacomponent for consumer product, for example, condom or tire. Forapast few years, the area of Para rubber is expanding continuously from 117.024 billion sqm in 2011 to 124.160 billion sqm in 2015. The product from Para rubber from 11.28 million tons in 2004 to 12 million tons in 2015. When the price was raising, the grow area also expanding since 2004. China Para rubber’s demand is raising highly. In contrast, Japan and Europe’s demand are decreasing. China is expanding economic and manufacturing continuously, that’s why rubber provider must rely on China more than the others. This isagreat opportunity for Myanmar to takeachance in Para rubber to grow it or transform intoaproduct for usage or exporting. This plant could drive the country in the term of energy and product which are worth for investment both.
12 MODERN MANUFACTURING MYANMAR EDITION
Boiler စနစ်ကို တိုးတက်အောင် ပြုပြင်ခြင်းဖြင့် စွမ်းအင်ကုန်ကျစရိတ်ကို လျော့ကျစေခြင်း Reduce Energy Cost with Boiler Improvement
Boiler (ခေါ်) ရေနွေးငွေ့ ပေါင်းအိုးသည် စက် မှုလု ပ် င န်းများ၌ အထူးသဖြင့်
က လီ စာနှိုက်ြ က က် ကို ပ င် မ ထု တ် ကု န် အြ ဖ စ် ထု တ် လု ပ်နေ သ ည့် A A
အစားအစာစက်မှုလုပ်ငန်းပိုင်း၌ တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုခံရသည့် ရေနွေးငွေ့ထုတ်စက်
ကြက်အစိုထုတ်လုပ်ရေး စက်ရုသံည် တစ်နှစ် (310)ရက်၊ တစ်ရက်(9)နာရီ မနက်
ြ ဖ စ် သ ည် ။ရေနွေးငွေ့ပေါင်းအိုးသ ည် မီးထိုးဆီ ၊ ဒီ ဇ ယ် ဆီ ၊ L P G ဂ က် စ် ၊
08:00 နာရီမှ 17:00 နာရီအထိ လည်ပတ် လုပ်ကိုင်နေပြီး၊ လွန်ခဲ့သော နှစ်တွင်
စိုက်ပျုးရေးဇီိဝလောင်စာ အစရှိသည့် လောင်စာအမျုးများစွိာကို အသုံးပြုနိုင်သည်။
လျှပ်စစ်ဓာတ်အား 656,753 ကီလိုဝပ်-နာရီ သုံး၍ တစ်နှစ် ဓာတ်အားခ 2,553,971
အကယ်၍ လုပ်ငန်းရှင်မှ ရေနွေးငွေ့ပေါင်းအိုး၏ စွမ်းရည်ကို မြှင့်တင်မှုနှင့် ရေနွေး
ဘတ် ကျသင့််ပါသည်။ တွက်ယူပါက တစ်ယူနစ်ပျမ်းမျှလျှပ်စစ်ဓာတ်အားခမှာ 3.89
ငွေ့ပေးပို့မှုစနစ်တစ်ခုလုံးကို စစ်ဆေးပြင်ဆင်မှု ပြုနု င်ိပါက
ဘတ် ကျပါသည်။ ကြက်မွှေးကို ရေနွေးဖျောရန်နှင့် ကြက်သွေးခဲ ပြုတ်ရန် တပ်ဆင်
စွ မ်းဆောင် ရ ည် ကို တိုးတက်စေပြီး၊ ရေနွေးငွေ့  ဆုံးရှုံး မှု ကို လျော့ ကျစေနိုင် မ ည်
ထားသည့်ရေနွေးငွေ့ပေါင်းအိုးမှာ 1.5 တန်/နာရီ အရွယ် ဖြစ်ပြီး၊ ထင်းလောင်စာသုံး
ဖြစ်ပါသည်။ ဤစာတမ်းတွင် ဘွုင်ိ လာမောင်းနှင်မှုကုန်ကျစရိတ်ကို လျှော့ချပေးနိုင်မည့်
ရေနွေးငွေ့ပေါင်းအိုး သုံးစွမှဲု အချက်အလက်များမှာ အောက်ပါအတိုင်း ရှိပါသည်။
နမူ နာပြ ဘွုင်ိ လာပြုပြင်ရေးစနစ် နှ င့် စွ မ်းအင်ချွေတာမှု ၌ သိ သာသည့် ရ ရလဒ် ကို ဥပမာပေး၍ ကျွန်ုပမ်ှ တင်ပြသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ နမူနာပြလုပ်ေဆာင်မှု အစီအမံများမှာ 1. ရေနွေးငွေ့ပေါင်းအိုး၏ စွမ်းရည်ကို မြှင့်တင်ခြင်း အစီအမံ 2. ရေနွေးငွေ့ပေးပို့ဖြန့်ဝေမှုစနစ်ကို ပြုပြင်ရေး အစီအမံ
3. အစားအစာပြုတ်ရာတွင် LPG ဂက်စ်ေနရာ၌ ထင်းလောင်စာ ပြောင်းလဲသုးံ စွခြင်ဲး အစီအမံ 4. ရေနွေးငွေက့  ရိယိာပစ္စည်း နှင့် ပေးပြို့ ဖန်ြ့ ဖူးမှုစနစ်ကို အပူကာပစ္စည်း အုပ်ေပးခြင်း
အဆိပုါစီမချံက်မစတင်မနီငှ့် လုပ်ေဆာင်ပြီးနောက် အမှနတ်ကယ် လောင်စာသံုး စွမှဲု စစ်ဆေးတိုင်းတာချက် အသေးစိတ်ရရလဒ်ကို လေ့လာကြည့်ရအောင်။
1. ရေနွေးငွေ့ပေါင်းအိုး၏ စွမ်းရည်ကို မြှင့်တင်ခြင်း အစီအမံ နောက်ခံအကြောင်းနှင့် အသုံးချမှုပုံစံ
13 JANUARY - MARCH 2017
TECHNICAL ENGINEERING ပြုပြင်မှုမပြုမီ တွေ့ရသည့် စက်ကိရိယာပစ္စည်း/စနစ်၏ ပြဿနာများ စူးစမ်းလေ့လာချက်အရ စက်ရုံသည် 1.5တန်/နာရီကျ ရေနွေးငွေ့ပေါင်းအိုးကို တပ် ဆင်ထားပြီး၊ ပမာဏ များပြားသည့် ထင်းလောင်စာကို သုံးစွ၍ဲ တစ် ရ က် 10 နာရီ လည်ပတ်ကာ၊ စက်ရုသံည် အိတ်ဇောငွေ့ အပူချန်ိ တိုင်း ကိရိယာတပ်ဆင်ထားမှု
ရေနွေးငွေ့ပေါင်းအိုးမှ တိုင်းတာတွေ့ရှချိက်များ
မရှိေကြာင်း တွေရ့  ရှိ ပါသည်။ ရေနွေးငွေေ့  ပါင်းအိုး ၏ အိတ်ေဇာပေါက်နေရာရှိ အိတ်ေဇာငွေ့
အခြေအနေကို စစ်ဆေးကြည့်မှုမှ အိတ်ဇောငွေ့သည် အတော်အတန်မြင့်မားသည့်
နှု န်းထားဖြစ်သော အပူ ချန်ိ 335 °C နှ င့် အောက် ဆီ ဂျင် ပ မာဏပါဝင် မှု10% ခန့်  ပါဝင်ကြောင်းတွေ့ ရှိ ရ သည် ။ ထို သို့ြ ဖစ် ရ ခြင်းမှာမီးနှ င့် ထိတွေ့ ရ သည့် မီးပြောင်းမျက်နှာပြင် ၌ အခိုးအမှု န် များ ကပ် ညှိမှုနှင့် လောင် ကျွ မ်းခန်းအတွ င်းသို့  သင်တေ့ာ်သည့် ပမာဏထက်ပေို သာ အောက်ဆဂျီင်ပေးသွင်း မှုတေ့ို ကြာင့် ဖြစ်ကြောင်း တွေ့  ရှိ ရ သည် ။ ထို သို့ြ ဖစ်ြ ခင်းကြောင့် အိ တ်ဇောငွေ့ နှ င့် အ တူ အပူ စွ မ်းအင် ကို အလဟဿ စွန့်ပစ်ဆုံးရှုံးမှု ဖြစ်စေပါသည်။ စမ်းသပ်တိုင်းတာမှုအချက်အလက်များကို
အောက်ပါအတိုင်း အနှစ်ချုပ် တင်ပြနိုင်ပါသည်။
စီမံချက်သဘောတရားနှင့် လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်များ စက် ရုံ သည် အိ တ်ဇောငွေ့  အ ပူ ချိန် ကို တို င်းတာရန် အ တွ က် သာမို မီ တာတပ် ဆ င် ထားမှု မရှိေ သးခြင်းကြောင့် အိ တ်ဇောငွေ့  အ ပူ ချိန် တို င်းကိ ရိ ယာကို တပ် ဆ င် ၍ ထွ က် လာသည့် အိ တ်ဇောငွေ့  အား
ထု တ် လု ပ် လို က် သ ည့်ရေနွေးငွေ့ 
အပူချိန်မှနေ၍ 50-60 °C ထက် ပို မမြင့် အောင် ပေါင်းအိုးကြီးကြပ်သူကို ထိန်းချုပ်စေရန် လုပ်ဆောင်သင့်သည်။ ဤသို့စစ်ဆေးထိန်းချုပ်ခြင်းဖြင့် ပေါင်းအိုး၏ မီးပြောင်းအတွင်း ဖက်ကို မည်သည်အ့ချန်ိ ၌ သန်ရ့  ငှ်း မှုများ လုပ်ေဆာင်ရန် အစီအစဉ်များ ချမှတ်မည်ဟု စက်ရုမှံ သုံးသပ်မှု ပြုစေနိုင်သည်။ ထို့အပြင် စက်ရုသံည် အိတ်ဇောငွေ့ အတွင်းရှိ
အောက်ဆီဂျင်ပမာဏကို 7-8% သို့ လျှော့ချရန်အတွက် မီးဖိုတွင်းသို့
ပေးပို့ သော လေပမာဏကို လျှော့ ချသင့် သ ည် ။ အထက် ပါထိ န်းချုပ် ချန်ိ ညှိမှုများ ကို သင့်တော်စွာ လုပ်ဆောင်နုင်ိပါက အိတ်ဇောငွေ့နှင့်အတူ ထွက်သွားသည့် အပူ ဆုံးရှုံးများကို လျှော့ချနိုင်မည်ဖြစ်ကာ၊ ရေနွေးငွေ့ထုတ်လုပ်မှုစနစ်၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို တိုးတက်လာစေပါမည်။ 1.5 တန်/နာရီကျ ထင်းလောင်စာသုံး ရေနွေးငွေ့ပေါင်းအိုးသုံးစွမှဲု နှင့်
ပြုပြင်ချန်ိ ညှိပြီးနောက် အနေအထား
စက် ရုံသ ည် အိ တ်ဇောငွေ့  အ ပူ ချန်ိ တို င်းကိ ရိ ယာနှ င့် လောင် ကျွ မ်းခန်းတွ င်းသို့ လေ သွင်းမှုနှုန်းထား ချိန် ညှိမှုကိ ရိ ယာကို တ ပ် ဆ င် ၍ သ င့်တော် သ ည့်
စစ်ဆေးတွေ့ရှမှိုရရလဒ်
လို က် နာလု ပ်ဆောင် မှုအ စီ အ မံ များကို ရေးဆွ ကျင်ဲ့ သုံးစေပါသည် ။ ဤအတွ က်
လုပ်ကိုင်သူမှ ထင်းလောင်စာ ပေးသွင်းမှုကို ပြန်လည်ချန်ိ ညှိလျက် ထွက်လာသည့် အိတ်ဇောငွေ့အား ထုတ်လုပ် လိုက်သည့်ရေနွေးငွေ့ အပူချန်ိ မှနေ၍ 50 - 60 °C ထက်မပိေုစရန် တိငုး တာစေပါသည်။ ထိအ့ု ပြင် မီးတောက်နငှ့် ထိတွေရ့  သော မီးပြောင်း အတွ င်းဖက် မျက်နှာပြင် သ န့်  ရှင်းမှု အစီ အ မံ များ ထားရှိစေပါသည် ။ မီးပြောင်းသန်ရ့  ငှ်း ရေး လုပြ် ပီးနောက် ထွကလ်ာသည့် အိတ်ေဇာငွေအ့  ပူချန်ိ ထက် သန်ရ့  ငှ်း မှုမပြုမီ ယခင်အပူချန်ိ သည် ပျမ်းမျှ 30°C လောက် မြင်ေ့ကြာင်း တွေရ့  ပါက ပြုပြင်ချန်ိ ညြှိ ပီးသော ဘွုင်ိ လာအိုး၏စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် ချွေတာနိုင်မှုအနေအထားမှာ အောက်ပါအတိုင်း
ရင်းနှးမြှီုပ်နငွှေံ
ဘတ်/နှစ် (သို့) 2.34 toe/နှစ်
2. ရေနွေးငွေ့ပေးပို့ဖြန့်ဖြူးမှုစနစ် ပြုပြင်ချန်ိ ညှိရေး အစီအမံ နောက်ခံအကြောင်းနှင့် အသုံးချမှုပုံစံ အစားအစာနှင့် သစ်သီး ရည် ထုတလ်ပုသ်ည်စ့က်ရသုံ ည် ထုတလ်ပုေ်ရးလုပင်န်းစဉ်၌ သုံးစွရန်ဲအတွက် ရေနွေးငွေ့ထုတ်လုပ်သော ရေနွေးငွေ့ပေါင်းအိုး 1 စုံ ရှိ၍ မီးထိုးဆီကို လောင်စာအဖြစ် သုံးစွပါသည်ဲ။ ပေါင်းအိုးကို တစ်ရက် (24) နာရီ၊ တစ်နှစ် (312) ရက် လည်ပတ်ပြီး၊ (6) ဘားဖိအား ရှိသော ရေနွေးငွေ့ကို ထုတ်လုပ်ကာ ပေါင်းတင်ခြင်းနှင့် ပိုးသတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်သို့ ပေးပို့ဖြန့်ဖြူးနေပါသည်။
အိတ်ဇောငွေ့အပူချန်ိ တိုင်းကိရိယာနှင့် လေသွင်းမှုနှုန်းထားချန်ိ ညှိမှုကိရိယာ တပ်ဆင်မှု အနေအထားပြဓာတ်ပုံ
14 MODERN MANUFACTURING MYANMAR EDITION
TECHNICAL ENGINEERING ပြုပြင်မှုမပြုမီ တွေ့ရသည့် စက်ကိရိယာပစ္စည်း/စနစ်၏ ပြဿနာများ ရေနွေးငွေ့သုံးစွမှဲု အတွက် ရေနွေးငွေ့ပေးပို့မှုပိုက်များ တပ်ဆင်လျက် တစ်ချို့ သောရေပူသုံးစွနေရာများ၌ဲ
ရေနွေးငွေ့ဖမ်းစနစ် မထားရှိပဲ၊ ဗားဆို့ကိုဖွင့်ခြင်းဖြင့်
ရေနွေးငွေမ့ျား ထွကလ်ာစေသည်ပ့စုံြံ ဖင့် စီစဉ်ပြုလုပထ်ားသည်။ ဤနည်းစနစ်မှာ စံနနှုး မီ ရေနွေးငွေ့ဖမ်းစနစ် မထားပဲ ရေနွေးငွေ့အတွင်း၌ ရေများရောပါမလာစေရန် ရေပူများကို လွှ တ် ထု တ် ထွက် သွားစေခြင်းဖြင့် ရေနွေးငွေ့  အ ရည် အ သွေးကို ကောင်းမွ န်အောင် ပြုလု ပ် သ ည့် နည်းဖြစ်ြ ပီး၊ အကျုးဆက်ိအ ဖြစ် ရေနွေးငွေ့  ပါယို စိ မ့် ထွက် သွားမှု ဖြစ်စေသည်။ စူးစမ်းချက်အရ ရေနွေးငွေသ့ုးံ ကိရယိာပစ္စည်း ၏ အောက်ဖက်ပကိုေ် နရာမှ ရေနွေးငွေ့  ယို စိ မ့် မှုသ ည် အပူ စွမ်းအင် ကို ဆုံးရှုံးမှု ဖြစ်စေကြောင်းတွေ့  ရှိ ရ သည် ။ ထို့ကြောင့် ရေနွေးငွေ့စနစ်တွင် အပူစွမ်းအင်ဆုံးရှုံးမှုကို ချွေတာနိုင်ရန် အဆောတလျင် ပြုပြင်ကုစားမှုပြုရန် လိုအပ်ကြောင်း ထင်မြင်ပါသည်။
စီမံချက်သဘောတရားနှင့် လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်များ ရေနွေးငွေ့ ပေးပို့ြ ဖန့်ြ ဖူးမှု ကိ ရိ ယာ(သို့  ) ရေနွေးငွေ့  သုံးကိ ရိ ယာပစ္စ ည်းယိုစိမ့်မှုကြောင့် ထွက်သွားသည့်
စံနှုန်းမကိုက်ညီသည့် ဗားဆို့နှင့် ရေနွေးငွေ့ဖမ်းစနစ် တပ်ဆင်ထားမှုကြောင့် ရေနွေးငွေ့ယိုစိမ့်ဆုံးရှုံးမှုပြပုံ
ဆံုး ရံှးု သွားနိုငသ်ည်။ အပူဆုးံ ရံှးု မှု လျော့ကျစေရန်အတွက် ဗားဆိ၏့ု ယိစုမိမ့် ကှို ပြုပြင်ရန် ပြင်ဆင်မှုအလုပ်အဖွ့မှဲအောက်ပါအတိုင်း အစီအမံ ချမှတ်ထားပါသည်။ 1. ယိုစိမ့်မှုအပေါက်အရေအတွက်နှင့် အရွယ်အစားကို စစ်ဆေးခြင်း - ရေနွေးငွေ့ ပန်းထွက်နေသော 70 cm အရွယ်ရှိပေါက်ပြဲမှု 1 နေရာ တွေ့ရှပိါသည်။2.လေ့ လာစ မ်းသ ပ် ချက် အ ရ စံနှု န်းနှင့် မ ကို က် ညီ သ ည့် ဗား ဆို့ နှ င့် ရေနွေးငွေ့  ဖ မ်းစနစ် တပ် ဆ င် ထားကြောင်း
တွေ့  ရ သည့် အ တွ က် ပြင် ဆ င် မြှု ပုရန်
လိုပါသည်။ ထို့အတွက်ကြောင့် ပြင်ဆင်မှုအလုပ်အဖွ့သဲည် ရေနွေးငွေ့ ဖမ်းစနစ်ကို အရေအတွ က် ထ ပ် တိုး၍ ဗားဆို့  အ သစ်ပြောင်းတပ်ြ ပီးရေနွေးငွေ့  ပို က် လို င်းစနစ် ကို ပြုပြင်ချန်ိ ညှိ သွားရန် သဘောရပါသည်။3. ဗား ဆို့  အ သ စ်ြေ ပာင်းတ ပ် ရ န်နှ င့်ရေနွေေ ငွ့ ဖ မ်းစ န စ် ကို ထ ပ် တိုးတပ်ဆင်ရန်အတွက် အလုပအ်ဖွသ့ဲည် ပစ္စည်း မှာကြားဝယ်ယေူရးဌာနနှင့် ဆက်သယြွ် ပီး ထိုကိရိယာပစ္စည်းများ၏ ဈေးနှုန်းကို စုံစမ်းမေးမြန်းစေပါသည်။ စံနှုန်းနှင့်အညီ ဗားဆို့အသစ်နှင့် ရေနွေးငွေ့ဖမ်းစနစ်ကို တပ်ဆင်ထားသည့်ပုံ
ပြုပြင်ချန်ိ ညှိပြီးနောက် အနေအထား စံနှုန်းနှင့်အညီ ဗားဆို့အသစ်နှင့် ရေနွေငွေ့ဖမ်းစနစ်ကို ထပ်တိုးတပ်ဆင်ပြီးနောက်
စ က် ရုံ တ စ် ခု ချင်းစီ ၏
ယိုစိမ့်သွားသည့် ရေနွေးငွေ့နှင့်အတူ အပူဓာတ်ဆုံးရှုံးမှုကို လျှော့ချနိုင်ပါမည်။
ထု တ် လု ပ် မှုအြေ ခ အနေ ကို လို က်ြ ပီး
အရေးယူလုပ်ဆောင်ချက်တစ်ရပ်စီ၏ ရင်းနှီးမြှုပ်နမှုံ ပမာဏသည် မများလှကြောင်းနှင့် အရင်းကျေကာလသည် (1)နှ စ် ထ က် မကျော်ကြောင်းတွေ့  ရ မည် ဖြစ် သ ည် ။
သို့ြ ဖစ် ပါ၍ ရေနွေးငွေ့ ပေါင်းအိုးစနစ် ကို ပုံ မှန် စစ်ဆေး၊ စောင့်ရှောက် မြှု ပုခြင်းဖြင့်
ရေနွေးငွေ့ ပေါင်းအိုးကို လို အ ပ် ချန်ိ ၌ ချက် ချင်းအသုံးပြုနိုင်စေပြီးလု ပ် င န်းရှ င် ၏
ဘတ်/နှစ် (သို့) 4.91 toe/နှစ်
စွမ်း အင်ပငိုး ကုနက်ျစရိတက်ို လျော့ကျစေပါမည်။ အစားအစာ ပြုတ်မအှုပိငုး နှငစ့် ပ်လျဉ်း၍
LPG ဂက် စ် အ စား ထင်းလောင် စာကို ပြောင်းလဲ သုံးစွ မှဲုနှ င့် ရေနွေးငွေ့  စ နစ် အား အပူကာပစ္စည်း များ အုပြ် ခင်းကို နောက်လာမည်စ့ာတမ်း၌ ဆက်လက် တင်ပြသွားပါမည်။ မှတ်ချက်: ဤစွမ်းအင်စောင့်ရှောက်ထိန်းသိမ်းမှု နမူနာပြကို အစားထိုးစွမ်းအင်ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် စွမ်း အင်ထနိ်း သိမ်း စောင်ရှေ့ာက်ရေးဌာန၏ အလတ်စားစက်ရတုံ ငွ်း စွမ်း အင်ကို စွမ်းရည်ထိရောက်စွာသုံးစွရေးပရောဂျက်ဲစီမံကိန်းဆိုင်ရာ သုံးသပ်လေ့လာချက်များမှ ရယူထားပါသည်။
Boiler is an equipment that has been used in various field of manufacturing, particularly in food processing. It can be used with many types of fuels such as furnace oil and diesel. If the boiler gotaproperly maintenance and improvement along with the system its connected, the efficiency will be improved and reduced overall steam loss of the system greatly. This could reduce the cost from boiler system obviously. The practical measures as follow 1. Boiler’s efficiency improvement. 2. Heat or steam transport system’s improvement. 3. Change the boiler’s fuel from LPG into wood fuel instead for food manufacturing. 4. Thermal insulation for equipment and heat transport system. The investment for each topic isn’t high and could return the cost within 1 year which depends on the condition for each manufacturing factory.
15 JANUARY - MARCH 2017
ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုကို လျှော့ချရန်အတွက် စွန့်စားရမှုအခွင့်အလမ်းကို ထိန်းချုပ်ကြီးကြပ်ခြင်း Risk Management for Loss Control
အကြိမ်များစွာပင် စက်မှုလုပ်ငန်းပိုင်းရှိ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်မှ နေ၍
ထိေ့ု ကြာင့် စွနစ့်ားရမှု စီမြံ ကီးကြပ်ရေးစနစ်သည် အောက်ပါအချက်များ ဖြစ်ထနွ်း စေမည့်
ပြင်းထန်သည့် အလုပ်ခွင်မတော်တဆမှု ဖြစ်ပွားလေ့ရှေိကြာင်း တွေ့ရသည်။ ဥပမာ
ပတ်ဝန်းကျင် အနေအထား ရှိစေအောင် ကူညီပေးနိုင်မည့် အခြေခံအဆောက်အအုံဟု
ကေဒါအရု ပ်ထုတ်လုပ်ရေးစက်ရုံ၌ ဖြစ်ပွားသော မီးဘေးကြောင့် ရာဂဏန်းရှိသော
ဆိုနုင်ိပါသည်။ ၎င်းတို့မှာ
အ လု ပ် သ မား များအား ထိ ခို က် ဒ ဏ် ရာရစေ သ ည့် အြ ပ င် လု ပ် င န်းကို လ ည်း
• ပြောဆိုဆက်သွယ်မှုများကို ပြုပြင်တိုးတက်စေခြင်း
ဆုံးရှုံး ထိ ခို က်စေမှု ၊ နောက်ြ ဖစ် ရ ပ် တစ် ခု မှာ အသက် စည်းစိ မ် ကို ပြင်းထန် စွာ
• ကုမ္ပဏီအဖွ့အဲစည်း၏ ရည်မှန်းချက်ကို ပေါက်မြောက်စေခြင်း
ပျက်စီး ဆံုး ရံှးု စေမှုအပြင် ဘေးပတ်ဝန်းကျင်နေ ပြည်သမျူားကိပုါ သက်ရောက် ထိခကို မ်ှု
• လူပုဂုလ်္ဂိ ၀န်ထမ်းရင်းမြစ်ကို လေ့ကျင့်ပျုးထောင်ိခြင်း
ဖြစ်စေသည့် ပို တ က် စီ ယ မ် ကလို ရိုက်ြ ဒပ် မှေ န၍ တောကြက်မောက် သီးခြောက်
• စီးပွားရေးဆောင်ရွက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်ကို ပြုပြင်တိုးတက်စေခြင်း
စ သ ည့်
• စွမ်းရ ည် ထိရောက် သ ည့် စ န စ် သ ည် ထိရောက် သ ည့် တာဝ န် ခံ မှုကို
ြ ဖ စ် ရ ပ် များ
မ ည် သ ည့်
လု ပ် င န်း
ေ ဆာင် ရွက် မှု၌ြ ဖ စ် ပစေ
ပြင်းထန်သည့် ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု ဖြစ်စေနိုင်သည့် မတော်တဆမှုသို့ ဦးတည်နုင်ိသော
မရေရာ စွ န့်  စားရမှု များ ရှိေ ကြာင်းတွေ့ြ မင် နု ငိ် သ ည် ။ ထို့ ကြောင့် အလု ပ် ခွင် တွင်းစွန့်စားရမှု အလားအလာများ ရှိသည့် ကုမ္ပဏီအဖွ့အဲစည်းမှနေ၍ စွန့်စားရမှုများကို စနစ် ကျစွာလေ့ လာသုံးသပ်ြ ခင်းနှ င့် အလု ပ် လု ပ် ကို င် သူ အဆင့် အားလုံးမှနေ၍ ၎င်းဖြစ်စဉ်၌ ပါဝင်ပတ်သက်စေမှု ရှိပါက ထိုစွန့်စားမှုစီမံကြီးကြပ်မှုကို ထိုက်သင့်သည့်
စွန့်စားရမှု (Risk) ဆိုသည်မှာ
စွမ်း ရည် ထိရောက်မှု ဖြစ်စေမည်ဖြစ်သလိ၊ု ၎င်းသည် အကာအကွယဒ်ငိုး တစ်ခထုက်ပ၍ို
ဆုံးရှုံးပျက်စီးမှု ဖြစ်စေနိုင်သည့် အလားအလာ ဖြစ်ပြီး၊
(သို့မဟုတ်) ‘နွားပျောက်မှ ခြံကာ’ လုပ်ဆောင်ချက်အစီအမံမျုးထက်ိပိုမိုသည့်ရလဒ်ကို
၎င်းကို ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့် ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု (သို့)
ဖြစ်ရပ်၏ ပြင်းထန်မှုမှုရလဒ် နှင့် ထိုပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု ဖြစ်စေနိုင်သည့်ဖြစ်နုင်ိစွမ်းမှ အခြေခံ၍
စွန့်စားရမှု စီမံကြီးကြပ်မှု အယူအဆနှင့် လုပ်ငန်းစဉ်စည်းမျဉ်း
စွ န့်  စားရမှု စီ မံြ ကီးကြပ် မှုဆို သ ည် မှာ စွ န့်  စားရမှု ပို င်းနှ င့် ပ တ် သ က်ြ ပီးဆုံးဖြတ် ချက် ချခြင်းနှ င့် ဆုံးဖြတ် ချက် ချပြီးနောက် လု ပ်ဆောင် ရ မည့် အ စီ အ မံ များ
(Possibility of Loss ; J.R. Taylor, 1994)
ဖြစ်သည်။ စီမံအုပ်ချုပ်သူများ ပြောင်းလဲသွားသည့်တိုင်အောင် စီမံကြီးကြပ်ရေးစနစ် ရှိထားြ ခ င်ြး ဖ င့် ၎င်း စ န စ် ကို တ ည် တံ့စေ ရ န် ကူ ညီပေးနို င် ပါသ ည် ။
16 MODERN MANUFACTURING MYANMAR EDITION
SAFETY စွန့်စားရမှုအလားအလာကိုသုံးသပ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (Risk Assessment Process) စွ န့်  စားရမှု အ လားအလာကို သုံးသပ်ြ ခင်းဖြင့် စီ မံ ခ န့်  ခွသဲူ( သို့  ) အလု ပ် ရှင် မှအရေးကြီး(အကျပ် အ တည်း)
အချက် ကို လို က် ၍ ထိ န်းချုပ် မှုကို အစဉ် လို က်
အစီအစဉ် ချမှတ်စေနိုင်အောင် ကူညီပေးနိုင်မည် ဖြစ်သလို၊ မည်သည့်စွန့်စားရမှုသည် လက်ခံနု င်ိသည့်အနေအထား၌ရှိကြောင်း၊ မည်သည့် စွန့်စားရမှုကို ထိန်းချုပ် (သို့) ဖယ်ရှားရမည်ကိုဖြစ်ကြောင်းကို ဆုံးဖြတ်နုင်ိအောင် ကူညီပေးနိုင်သည်။ စွ န့်  စားရမှု စီ မံြ ကီးကြပ် မှုအ ဖွ့  နှဲင့် ကု မ္ပ ဏီ ၏ ၀န် ထ မ်းများသည် နေ့ စ ဉ် မိမေိတြွ့ ကုံရသည်စ့နွစ့်ားရမှုကို သတ်မတှ် ပြသနိုင၍်၊ ဖြစ်လာနိုငသ်ည်အ့န္တရာယ်များနှင့် စွ န့်  စားမှု များကို သိ ရှိ နိုင် ရ မည် ။ အခြားစွ န့်  စားရမှု များနှ င့် ဆက်နွှ ယ်နေသော စွနစ့်ားရချက်များကို သံုး သပ်နငို စ်မွ်း ၊ အရေးပါသော စွနစ့်ားရမှုများကို ထိန်း ချုပ်ကြီးကြပ်မှု အစီ အ စဉ် များ ချမှ တ်ရေးဆွ နိဲုင် စွမ်း၊ မိ မိ လို အ ပ် သ ည့်ြ ပုပြင်ပြောင်းလဲ မှုများကို လက်တွေ့လုပ်ဆောင်နု င်ိစွမ်းနှင့် ချမှတ်ထားသည့်စနစ်ကို ကောင်းစွာ စောင့်ကြည့် စစ်ဆေးနိုင်စွမ်း ရှိရမည်။
စွန့်စားရမှုဆိုင်ရာ အရေးကြီးစည်းမျဉ်းဥပဒေသများ (Risk Principles) အကယ်၍ အန္တရာယ်နှင့် ထိတွေ့မှုသည် စွန့်စားရမှုကို တိုက်ရုက်ိဖြစ်စေသည့် အကျုးသက်ိရောက်မှု ရှိပါက စွန့်စားရမှု = ပြင်းထန်မှု X အလားအလာ မတော်တဆဖြစ်ပွားမှုအလားအလာသည် ထိတွေ့မှုအကြိမ်ရေအနည်းအများပေါ် မူတည်ပါက စွန့်စားရမှု = ပြင်းထန်မှု X အလားအလာ X ထိတွေ့မှု မှားယွင်းမှု/ ကျဆုံးမှုတိုင်းမှနေ၍ ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်မဟုတ်။ ဖြစ်ပေါ်သည့် ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများသည် အချန်ိ ကာလတစ်ခုတည်းအတွင်း၌ ဖြစ်ပေါ်ခြင်း မဟုတ်တန်ရာ။ အတူတကွ ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများကို ပူးတွဖြစ်ဲပွားနိုင်မှု အလားအလာသည် ဖြစ်ရပ်တစ်ခုတည်းမှ ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု ဖြစ်စေနိုင်သည့်အလား အလာထက် နည်းပါးသည်။ ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုဖြစ်စေသည့် အကြောင်းရင်းနှင့် ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုရလာဒ်သည် အခြေခံအကြောင်းခံနှင့် စီမံကြီးကြပ်မှု၏ အမှားအယွင်းနှင့် ဆက်စပ်မှု ရှိသည်။ ကြားအလယ်ရှအိကြောင်းခံဖြစ်ရပ် (Immediate Cause) ကို ထိန်းချုပ်ခြင်းဖြင့် စွန့်စားရမှု အလားအလာကို ပြည့်စုံစွာထိန်းချုပ်နုငိ် ခြင်းမရှိ ။ အခြေခံ အ ကြောင်းခံြ ဖစ် ရ ပ် (Basic Cause) ကို ထိ န်းချုပ်ြ ခင်းဖြင့် သာစွ မ်းရည် ထိရောက် သ ည့် ထိ န်းချုပ်ြ ကီးကြပ် မှုကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။ စွန့်စားရမှုအလားအလာမြင့်သည့်လုပ်ရပ်၊ ထိတွေ့မှုနှင့် ဖြစ်ပေါ်သည့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုရလာဒ်ကို သတ်မှတ် အတည်ပြုရန် အလွန် အရေးကြီးသည်။ ဥပမာ • စွန့်စားရမှုအလားအလာရှိလုပ်ရပ် • Start – Up Plant လုပ်ခြင်း • စွန့်စားရမှုအလားအလာမြင့်သည့် ထိတွေ့မှု • ဆိုင်ယာနိုက်ဂက်စ်ဓာတ်ငွေ့ • အဓိကဆုံးရှုံးမှုရရလဒ် • မီးလောင်မှုဖြစ်၍၊ အများပြည်သူဆီသို့ ဂက်စ်ယိုစိမ့်ရောက်ရြှိ ခင်း
17 JANUARY - MARCH 2017
SAFETY စွနစ့်ားရမှု အလားအလာကို ထိရောက်စွာ သံုး သပ် အကဲဖြတ်ခြင်း ဆိငုရ်ာ လုပင်န်းစဉ် (10)ချက်
လု ပ်ဆောင်နေ သ ည့် စွန့်  စား ရ မှုအ လား အလာ သုံးသပ် အ ကဲြ ဖတ် ချက် သ ည် လက်တွေ့  အမှ န် (Practical) လု ပ်ဆောင် နိုင်ကြောင်းနှ င့်
စွ န့်  စားရမှု အ လား အလာ သုံးသပ် အကဲြ ဖတ် မှုလု ပ် င န်းစဉ် ၌ သက် ဆို င် ရာ
လူ ပု ဂ္ဂုလ်ိများ အသီးသီးအထူးသဖြင့် စွ န့်  စားရမှုနှ င့် တို က် ရိုက် ပ တ် သ က် သ ည့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်သူ ၀န်ထမ်းရင်းမြစ်တို့ကို ပါဝင်ပတ်သက်မှု ရှိစေရမည်။ သုံးသပ်
ဖြစ်ရပ်မှန်အပေါ် (Realistic) အခြေခံ ထားကြောင်း
အကဲဖြတ်မှု လုပ်ငန်းစဉ်သို့ မ၀င်ရောက်မီ ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို အများဆုံး
စနစ် တ ကျ သုံးသပ် အကဲြ ဖတ် မှု
ပြုခြင်းဖြင့်
စွ န့်  စားရမှု အ ပေါ် အကျိုးသက်ရောက် မှုရှ သည်ိ့
အောင်းပါနေသည့် စွ န့်  စားရမှုနှ င့် လု ပ်ဆောင်နေသည့်
အရေးပါသော အချက်များကို အလေး ပေးပါ။ (big picture
စွန့်စားရမှု အလားအလာ များကို အားလုံး ခြုံငုံမိနုင်ိစေရန်
;PEME) အရေး မပါသော အချက်များအတွက် အချန်ိ ကုန်
အန္တရာယ်ကို ရှာဖွေသတ်မတှမ်ြှု ဖင့် လုပင်န်းစဉ်ကို
စူးစ မ်းသ တ် မှတ် ထား သ ည့် အန္တ ရာယ် မှေ န ၍
စွနစ့်ားရမှုအလားအလာကို အဖြစ်မနှ် အပေါ် မူတည် သံုး သပ်ရန်နငှ့် ဖြစ်ရပ်၏ ဖြစ်တန်စွမ်း အခြေခံမဲ့စွာဖြင့် သုံးသပ်ခြင်း မပြုသင့်။ လက်ရှိလုပ်ငန်းခွင်တွင်း လက်ေ တွ့  ဖြစ်ရပ် အချက်အလက်များမှ သုံးသပ်ရမည်။ သုံးသပ် ရာ၌ ပုံ မှန်
တို က် ရိုက် အလု ပ် တာဝန်
ဆောင် ရွက် သူ အပြင်
အလု ပ် ဌာနတွ င်းလာရောက် လ ည် ပ တ်
လေ့ လာသူ ၊
ကန်ထရိကုတ်ာနှင့် အများပြည်သူ တိက့ု ပိုါခြုံငံသုးံ သပ်လျက်
အလုပတ်ာဝန် များအပြင် လုပ်ေနကျမဟုတ်ေသာအလုပတ်ာဝန် (Non – Routine
မည်သူတို့သည် ထိုစွန့်စားရမှုကို ထိတွေ့သူ ဖြစ်ကြောင်းကို
Operations) တို့၏ လက္ခဏာရပ်များ ကိုပါ ခြုံငုံကြည့်၍ သုံးသပ်ရမည်။
သုံးသ ပ် ရာ၌ ဦးစွာ ရိုး ရှင်းသ ည့် န ည်းလ မ်း/ ကိ ရိ ယာများ
အသုံးပြုသင့်ကာ၊ လေးနက်သည့် အချက်အလက် သုံးသပ်မှုများအတွက် ပိုမို ရှုပ်ထွေး ခက်ခဲသည့်နည်းလမ်းများကို ထပ်ဆင့် အသုံးပြု နိုင်သည်။
သုံးသပ် ချက် ရ ရလဒ် အ သီးသီးကို စာဖြင့် ရေးသားမှတတ်မ်းတင်ထားရမည်။
စ၀င်းထ် ဖွန်စ်ကုန် လုပ်ငန်းခွင် ဘေးကင်းလုံခြုံရေးနှင့် သန့်ရှင်းကျန်းမာရေး အားပေးမြှင့်တင်မှုအဖွ့ (ထိဲုင်းနိုင်ငံ)
EXECUTIVE SUMMARY The working process of manufacturing sector could meet with fatal accident all the time, that means it will be plenty chance of risks occurred in cost, asset, property and life. For example, the case of Kader toy factory that had 188 people were killed and over 500 people were seriously injured, while the business gone fail and the damaged also went on the society around the area. What is risk then? Risk means the chance to cause loss which considering by the impact’s damage or its harmful that might giveachance of loss. The idea and method to do ‘risk management’ will provided safety continuously. The practical methods to do risk management operation are as follow: 1.
The evaluation method must base on practical and reality.
Involve staff must takeapart in measurement process and collect enough data before proceeding.
Analyze with systematic method for overall coverage measurement.
Emphasized the issue that could relate to any risks.
Identify and scope the dangerous point.
Evaluate and measure the considered risk.
Proceed the evaluation process based on reality and the opportunity that could be reference.
Identify the workforce that involved with the process.
Start with basic or practical tools or method first and develop complex method step by step into deep knowledge.
The outcome evaluation must be recorded into proper documentation.
18 MODERN MANUFACTURING MYANMAR EDITION
တိုင်းရင်းဆေးကို ခေတ်မှီစက်ဖြင့် ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်ကို … လိုက်ပါလေ့လာကြည့်ခြင်း အွားရ်အန်အိုဆွတ် စက်ရုံ Ouay Un Osoth, Modern Medicine Manufacturing အွားရ် အ န် အို ဆွတ် ဟု ဆို လို က် ပါက တို င်းရ င်းေ ဆးဝါး များကို ရွှေ န ဂါးတံ ဆိ ပ်ြ ဖင့် ဖြန့်ြ ဖူး
ရောင်းချနေသော
လူ အ များနား ယ ဉ်နေ သ ည့် လု ပ် င န်းဟု ပြောနိုင်ပါသည်။ သိ့ရုာတွင် အာဆီယနုံင်ိငံများနှင့် တို င်းရ င်းေ ဆးဝါး ကို စိ တ် ၀ င် စား မှုရှိေ သာအရှေ့ အ လ ယ် ပို င်းနို င် ငံ များအု ပ် စု ဆီ သို့  ပါ
ဈေးကွ က် ချ့ထွဲင် ရ န် အစီ အ စဉ်ြ ဖင့်
ကု န် ပ စ္စ ည်းအ ရ ည် အသွေး ကို ထိ န်းချု ပ် ၍ ထု တ် လု ပ် မှုတိုးတက်စေရန် အ တွ က် ခေတ် မီ စ က် သ စ်ြ ကီးများနှင့် န ည်းပ ညာများကို ဆောင်ယူအသုံးပြုထားသည့် ကုမ္ပဏီ၏ ဆေးဝါး ထု တ် လု ပ် မှုလု ပ် င န်းစဉ် ကို ယနေ့ ကျွန်ုပ် တို့  သွားရောက်လေ့လာကြပါမည်။
19 JANUARY - MARCH 2017
အွားရ်အန်အိုဆွတ်နှင့် မိတ်ဆက်ခြင်း • (1947)ခုနှစ်တွင် ရောဂါကုသမှု(တိုင်းရင်းဆေးပညာ) နှင့် ဆေးဝါးဖော်စပ်မှု (တို င်းရင်းဆေးပညာ) ဘာသာရပ် ခွဲ ဆို င် ရာတို င်းရင်းဆေးဝါးကု ထုံးပညာရှ င် ဖြစ် သူ ဦးစထင်းရ် စွ မ်းဘူ လ်ဝေ့ ချကန် မှ “အွားရ် အ န် အို ဆွတ်ဆေးဆို င် ” ကို တည်ထောင်လျက် ယနေ့ခေတ် သမားရိုးကျဆေးဝါးများနှင့် တိုင်းရင်းဆေးဝါးများကို ဖြန့်ဖြူးရောင်းချလာခဲ့ပါသည်။ • (1986)ခုနှစ်တွင် ဆေးဝါးအရောင်းဆိုင်မှနေ၍ GMP စံနှုန်းနှင့် ကိုက်ညီသော တိုင်းရင်းဆေးဝါး ထုတ်လုပ်ရေးစက်ရုလုံပ်ငန်းကို ပြောင်းလဲလုပ်ကိုင် ခဲ့ပါသည်။ • (1997)ခုနစှတ်ွင် ကုမဏ္ပ သီည် လက်ရအှိ ချန်ိ ၌ ဦးဖိစေ့စပ် စွမ်း ဘူလ်ေဝ့ချကန်မှ စီ မံ ခ န့်  ခွသဲူအ ဖြစ် ဦးစီးလု ပ် ကို င်နေသော အေ့ က် စ မူးဖလိ န် ဆို သ ည့် ကု မ္ပ ဏီ ကို တည်ထောင်လျက် တိုးမြှင့်လာသည့် သဘာဝဆေးဖက်ဝင်ပစ္စည်းများ လိုအပ်ချက်ကို ထောက်ပံ့ရန်အတွက် နောက်ထပ် စက်ရုံတစ်ရုံကို တည်ထောင်ကာ ‘HerbalOne’ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အောက် သဘာဝဆေးဖက်ဝင်အပင်ပစ္စည်း တို့မှ ထုတ်လုပ်သည့် ဖြည့်စွက်အာဟာရအစားအစာနှင့် ဆေးဝါးများကို ထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးပေး နေပါသည်။ • (2005 ) ခုနှ စ် မှ
ယနေ့  ကာလ အ ထိ တို င်အောင်
ကု မ္ပ ဏီ တွင်
အစားအစာနှင့်ဆေးဝါးများကော်မတီ၌ မှတ်ပုံတင်ထားပြီးသော သဘာဝဆေးဖက် ၀င်ပစ္စည်းကုန်အမယ်ပေါင်း (90) ကျော်အထိ ရှိနေပြီး၊ ကက်ပ်ဆူးလ်ဆေးတောင့်၊ လုံးထားသည့်ဆေး၊ အစေ့ပုံသွင်းဆေး၊ ဆေးမှုန့်၊ ဆေးရည်၊ ဖယောင်း လိမ်းဆေး၊
အချောင်းပုံစံ၊ အွုင်ိ့ မင့်တ်ဆီ စသဖြင့် ဆေးဝါးပုံစံအုပ်စုအစုံ ရှိပါသည်။
ဆယ် စုနှ စ် (7) ခုြ ကာ လု ပ် င န်းဆောင် ရွက် မှုမှအွားရ် အ န် အို ဆွတ် သ ည် မျုးရိုးအဆက်ဆက် ဆက်ခံ ရရှိလာသော အသိပညာကို ခေတ်သစ်နည်းပညာနှင့် ပေါင်းစပ်ပြီး မိမ၏ိထုတလ်ပုေ်ရးပိငုး အရည်အသွေးနှင့် စွမ်း ဆောင်ရည်ကို စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွ့ြံ ဖိုးဖော်ဆောင် လာခဲ့ြ ပီး၊ ထု တ် လု ပ်ရေးလု ပ် င န်း၌ အော် တို မ စ် တ စ် စ က် များ ဥပမာ ကက် ဆူးလ်ဆေးတောင့် တွင်းသို့ ဆေးပစ္စ ည်းသိ ပ် ထ ည့် စ က် ၊
ဒရိုင်းစပရေး
အခြောက် မှုတ် န ည်းဖြင့် ဆေးမှု န့်  ထု တ် လု ပ် စ က် အစရှိသ ည့် စက် သ စ် များကို သုံးစွလာသည်ဲ့အပြင် အောက်ပါအသေးစိတ်အချက်တိုင်းကိုလည်း အလေးထားလျက် လုပ်ဆောင်နေပါသည်။ 1. ကုန်ကြမ်းပစ္စည်း ရွေးချယ်မှု - စံနှုန်းမီစိုက်ပျုးရေးကျင်ိ့ထုံး (သို့) GAP Good agricultural practice နေရာများမှ ကု န်ြ ကမ်းပစ္စ ည်း ကို ရွေးချယ် ၀ယ် ယြူ ခင်းနှ င့် ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းလက်ခံချန်ိ ၌ အရည်အသွေးစစ်ဆေးခြင်း 2. ထုတလ်ပုမ်လှုပုင်န်းစဉ် - အဆောက်အဦး၊ ၀န်ထမ်းများ၏ သန်ရ့  ငှ်း ကျန်းမာရေးကို ထိန်းချုပ်မှုနှင့် နောက်ကြောင်းပြန်စစ်ဆေးနိုင်သည့် GMP PIC/S စနစ် အကူအညီကို ရယူသုံးစွထားပါသည်ဲ။ 3. အရည် အ သွေးစံနှု န်း- ကု မ္ပ ဏီ သ ည် အရည် အ သွေးပို င်းကို များစွာအလေးပေးလျက် ၊ ဆေးဝါးများကို ခေတ် မီ ကိ ရိ ယာများ ဖြစ်သော HPLC, Spectrophotomter အစရိသှည်တက့ိို သံုး စွလျက်ဲအရေးပါသည့် ဒြပ်ပစ္စည်း များ ဥပမာ ဆေးခါးကြီးပင်မှ Andrographolide ဒြပ် အစရှိသည်ကို စစ်ဆေးစေခြင်း ပြုပါသည်။ 4. ထည့် သွင်းထု ပ် ပိုးပစ္စ ည်း- မျိုးဆက် သ စ် အ တွ က် ခေတ် သ စ် သ ဘာ ၀ဆေးဖက်ဝင်ကုန်ပစ္စည်း ဆိုသည့် အတွေးအခေါ်ဖြင့် ထည့်သွင်းထုပ်ပိုးပစ္စည်းအသစ် များဖြင့် အစားထိုး ထုတ်လုပ်လာသလို၊ အညွှန်းစာသားများ ကိုလည်း မှန်ကန်အောင် ရေးသားထည့် သွင်းစေပါသည် ။ ထို့  အ ပြင် ကု မ္ပ ဏီ သ ည် ကျန်းမာရေးဝန်ြ ကီးဌာန အစားအစာနှငေ့် ဆးဝါးကော်မတီမှ ပေးအပ်သော အော်ယော် ကွာလတီဆကို (4) ကြိမန်ငှ့် ကျူလာလွနက်နွ် တက္ကသလိုစစင်ကောလိပမ်ှ ဘိငုဖ်ဆိုနှင့် စယမ်းကော်မာရှယဘ်ဏ်မှ ပေးအပ်သောဆု စသည့် အဖွအ့ဲစည်း အသီးသီးမှ ချးမြှီငမ့် မျှုားကိလုည်း ရရိထှားပါသည်။ ယနေ့ အ ချိ န် တွ င် ကု မ္ပ ဏီ သ ည် သမားရိုး ကျဆေးဝါးထု တ် လု ပ် မှု စံနှု န်းနှ င့် တန်းတူညီသည့် GMP PIC/S (Good Manufacturing Practice: Pharmaceutical Inspection Cooperation Scheme) ထု တ် လု ပ် မှု
ထောက် ခံ ချက် စံနှု န်း ကို
ရရှိထားပြီး၊ ၎င်းသည် အစားအစာနှင့် ဆေးဝါးများသည် ဘေးကင်း စိတ်ချရကြောင်း ကမ္ဘာ တ စ် ၀ှ မ်း ရှိ အစားအစာနှ င့် ဆေးဝါးများပညာရှ င် များ၏ လက်ေ တွ့  လု ပ်ေ ဆာင် အတည်ြ ပုချက် ရ ထားသည့် အရည် အသွေးထောက် ခံ ချက် စံနှု န်း ဖြစ် ပါသည် ။ ထို င်းနို င် ငံ ၏ သဘာဝဆေးဖက် ၀ င် ကု န် ပ စ္စ ည်း များပို င်း တွ င် အမြင့် ဆုံး အရည် အ သွေးထောက်ခံမှုစနစ်ဖြစ်သော ဤစံနှုန်းကို ကုမ္ပဏီသည် ထိုင်းနိုင်ငံ၏ ဒုတိယမြောက် လုပ်ငန်းရှင်အဖြစ် ရရှိထားပါသည်။
20 MODERN MANUFACTURING MYANMAR EDITION
ကုန်ကြမ်းပစ္စည်း လက်ခံယူခြင်းမပြုမီ အရေးကြီးဒြပ်ပစ္စည်းပါဝင်မှုကို စစ်ဆေးခြင်း
EXECUTIVE SUMMARY Herbal medicine is an innovative and knowledges of our ancestor foralong time. The herbals in each area are different from the other one which provide difference effect for the symptom. The herbal medicines usually produce by hand which compound and storageamedicine by local knowledge. Among the transformation of manufacturing ages Ouay-Un Osoth., Ltd from Thailand is one of the successful herbal medicine factory that achieved the certificated standard for manufacturing. This is an interesting model to upgrade the manufacturing scale into mass market which responds to the call of herbal and health-conscious market. Ouay-Un Osoth was founded in 1947, started from dispensary and developed into GMP Standard’s factory in 1986. From many years of experience with the business, they always focus on the issues that follow 1. Raw materials selection, choose from the certified agriculture plant and verify the quality before granted into the manufacturing process. 2. Manufacturing process, use GMP and PIC/S system to control overall hygienic condition along with the document for re-check or investigate the cause. 3. Quality Standard, the company giveavalue on quality as the first priority and also has examination process with advance tool such as HPLC. 4. Packaging, change intoamodern design with the idea of modern herbal medicine for new generation and provide proper instruction for medicine usage.
21 JANUARY - MARCH 2017
မဟာသတင်းအချက်အလက် Big Data ကို လက်ခံရန် အသင့်ပြင်ဆင်ထားခြင်း Prepare for Big Data!
အချက်အလက် (Data) သည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ အထူးသဖြင့် နည်းပညာ
တိုးတ က် မှုမ ရှိေ သြး ခ င်းေြ ကာင့်ြ ဖ စ် သ ည် ။ ယနေ့ ခေ တ် တွင် အ က ယ် ၍
ပြောင်းလဲ မှုမြန် ဆ န်ြ မင့် မားသည့် စက် မှုလု ပ် င န်းပို င်းအတွ က် အရေးပါသော
ကျွန်ု ပ် တို့  သ ည် ယခင် န ည်းဟောင်းအတို င်းသာ အချက် အ လက် ရယူ မြှု ပုပါက
ရင်းမြစ်တစ်ခု ဖြစ်ကြောင်းကို လုပ်ငန်းရှင်များမှ ကောင်းစွာ သိနားလည်ကြပါမည်။
လု ပ် င န်းလ ည် ပ တ် မှုအ မှားအ ယွင်ြး ဖ စ်ပေါ် နို င် သ ည့် အ ခွင့် အ လ မ်းကို
ရှိေနသည်အ့ချက် အလက်များ၏ ကိန်း ဂဏန်းပိငုး လေ့လာဆန်းစစ်ချက်ရရလဒ်များကို
ြ မ င့် မား လာေ စ ပါမ ည် ။ အ ဘ ယ်ြေ ကာင့် ဆိုသော် လု ပ် င န်းလ ည် ပ တ် မှု၌
ဆောင် ယူြ ပီးလု ပ် င န်းလည် ပ တ်ဆောင် ရွက် မှု၌ အသုံးချနိုင် ပါက ထို လု ပ် င န်းကို
ဆောင်ယူအသုံးချရမည့် အချက်အလက်များသည် များပြားလွန်းသဖြင့်
ရှေ့သို့ ကောင်းစွာ တိုးတက်ဖြစ်ထွန်းစေနိုင်မည့်အပြင် အမှားအယွင်းများ အသီးသီးကို
လူပဂုလ်္ဂိ အနည်းငယ်ဖြင်လေ့ာက်သာ ပြည်စ့စွုာံ နှင့် ထိရောက်စွာ တွကခ်ျက်၊ အသံုး ချရန်
များစွာလျှော့ ချပေးနိုင် မ ည် ဟု ယုံြ ကည် ရ ပါသည် ။ လု ပ် င န်းစတင် က တည်းက
မဖြစ်နငိုြ် ခင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။ ထိေ့ု ကြာင့် မှနက်န်သည့် အစီအစဉ် ချမှတ် ပြင်ဆင်မမျှုား
ကြည် ရှည် စွာ စုဆောင်းလာခဲ့ သ ည့် အချက် အ လက် ပ မာဏ အများကြီးရှိ ပါက
ပြုနိုင် ရ န် အတွ က်
ပို များလာသည့် အ လျောက် ပို မို မှန် က န် တိ ကျသည့် ရ လဒ် များကို ကောက် ယူ
အစောကတည်းကပင် နားလည်မှု ပြုထားရန် လိုအပ်ပါသည်။
ကြီးမားသည့် အ ချက် အ လက် ကြီးကြပ် စီ မံ မှုစနစ်ြ ကီးအား
နိုင်စေပါမည် ဖြစ်သည်။ အလားတူပင် အဆိုပါကြီးမားသည့် အချက်အလက်များ၏ ကိန်းဂဏန်းပိုင်း
အသီးသီး အတွက် ပိုမို လက်ခံယုံကြည်နုင်ိလောက်သည့် အသုံးချမှု ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။ ယခင်ခေတ်က စီးပွားရေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတစ်ခု မဖော်ဆောင်မီ လိုအပ်သည့်
B ig Data (သို့  ) မဟာသတင်းအချက် အ လက် ဆို သ ည် မှာ
ဆုံးဖြတ် ချက် ချမှ တ် နိုင် ရ န် အ တွ က် အချက် အ လက် များ ကောက် ယူ စုဆောင်းပုံ ကို
အချက်အလက်အစုအဝေးကြီး ဖြစ်ပြီး အနာဂတ်၌လည်း တစ်ဖြည်းဖြည်း
ပြန်ြ ကည့် လို က် သ ည့် အ ခါ ကု မ္ပ ဏီ အဖွ့  အဲစည်းတွ င်းရှိရာထူးမြင့် လူ ပု ဂ္ဂုလ်ိ၊
ပိုမို ကြီးမားလာသည့်အသွင် ရှိနေပါသည်။ နောင်တွင် အချက်အလက်
လေးစားဖွ ယ် ကျွမ်းကျင် သူ များ၏အတွေ့  အ ကြုံကို အခြေခံ ၍ အချက် အ လက်
အရွယအ်စားကို Terabytes ဖြင့် မသံုး နှုန်း တော့ပဲ Petabytes ဖြင့် အစားထံုး
ရယူလေ့ ရှိကြောင်း
သုံးနှုန်းကောင်း သုံးနှုန်းသွား နိုင်ပါသည်။
တွေ့  နိုင် သ ည် ။
ဤစနစ် ကို ယခင် က အသုံးတည့် စွာ
သုံးစွ နဲုိင်ြ ခင်းမှာကမ္ဘာြ ကီး၏အချက် အ လက် ဆက် သွယ်ရေးစနစ် သ ည် များစွာ
22 MODERN MANUFACTURING MYANMAR EDITION
အဖွ့အဲစည်းတွင်း အချက်အလက် (Internal Data)
အဖွ့အဲစည်းပြင်ပမှရရှိသ ည့်အချက်အလက် (External Data)
လူပုဂုလ်္ဂိ ဆိုင်ရာ အချက်အလက် (Personal Data)
BIG DATA အဖွ့အဲစ ည်းတွင်းဝ န် ထ မ်းရ င်ြး မ စ် ၊
လုပ်ငန်း၌ အထောက်အကူပြု ဆောင်ယူ
ပု ဂ္ဂုလ်ိေ ရးဆို င် ရာအချက် အ လက် ဥပမာ
ပရောဂျက်၊ ကုနပ်စ္စည်း ၊ အတွင်း ပိငုး ၀န်ဆောင်မ၊ှု
အသုံးချနို င်သော အရေးကြီးအချက် အ လက်
ဖောက် သ ည် (သို့  ) ၀န်ဆောင် မှုရယူ သူ ၏
ဌာန တ စ် ခု ချင်းစီ ၏ ခ န့်  မှန်းတွက် ချက် မှု
ဥပမာ အိ မ်ထောင် စု လူ ဦးရေစာရင်း၊ မိုးလေ
ကို ယ်ရေး အချက် အ လက် ၊
အချက် အ လက် များ ဥပမာ အို င် တီ ဌာန၏
၀သဌာနမှ မိုးလေ၀သ ခန့်  မှန်းချက် သ တင်း၊
ကု န် ပ စ္စ ည်းအပေါ် ထား ရှိေ သာအြ မ င် ၊
စက်ြ ပုပြင်ရေးမှ တ် တ မ်း၊ အရောင်းဌာန၏
အရောင်း (သို့) ၀န်ဆောင်မှု အချက်အလက်၊
ရေးပြမြေပုံ ၊ Truehits.net ၏ ၀ဘ် ဆို ဒ် ၀ င်
ကု န် ပ စ္စ ည်းဝ ယ် ယူရေးဌာန ၏ မှာြ ကား
ရောက်ြ ကည့် ရှုမှုကိ န်းဂဏန်းစာရင်းအင်း၊
၀ယ် ယှုမှုမှတ် တ မ်း၊ ၀န် ထ မ်းရေးရာ ဌာန၏
ထိုင်းဗဟိုဘဏ်၏ ငွေကြေး လဲလှယ်မှုနှုန်းထား
၀န်ထမ်းလစာနှုန်းထား အစ ရှိသည့် လုပ်ငန်း
အ စ ရှိသ ည့် သ တ င်းအ ချက် အ လ က် များ
လုပ်ကိုင်မှု (သို့) လုပ်ငန်းစဉ်များမှ ရရှိလာသည့်
ဖြစ်၍၊ အဆိုပါ သတင်း အချက်အလက်များကို
သတင်း အချက်အလက်များ ဖြစ်သည်။
နိုင် ငံ တွင်းနှ င့် နိုင် ငံြ ခားမှ စီးပွားရေး လု ပ် င န်း
ဖောက် သ ည် ၏
သဘောဆောင်သော (သို့  ) အကျုးအမြတ်ို မရှာသော အဖွအ့ဲစည်း၊ ကုမဏ္ပ ၊ီ အလုပဌ်ာန (သိ)ု့ ကုန်တိုက်များ နှစ်မျုးစလိုံးမှ ရနုင်ိသည်။
အမှ န် မှာ မူ
မည် သို့  ပ င် ဆိုစေကာမူ မကြာခဏအားဖြင့်
သတင်းအချက် အ လက် ဆ က် သွယ်ရေးနည်းပညာ အထူးသဖြင့်
တွေ့  ရ လေ့ ရှိ သ ည် မှာ ပရောဂျက်
အင်တာနက်မတှစ်ဆင့် သတင်း အချက်အလက်ဆက်သယွမ်ှု ဖြွ့ ဖိုံးတိုး တက်ခြင်းနှငအ့် တူ
များစွာတွင် ရရှိလာသည့် အချက်အလက်များကို အချက်အလက် သိမ်းဆည်းရေးစနစ်
ကုမဏ္ပ အီဖွအ့ဲစည်းအတွက် သတင်းအချက်အလက်ရင်းမြစ်ကို လွယက်စွူာ နှင့် ထွေပြားစွာ
(Storage) တွင်းသို့  တစ် ချိန် လုံးဖြစ်စေ၊ အချိန် အ ပို င်းအခြားလို က်ြ ဖစ်စေ
ရယူ ရောက်ရှနိုင်ိစေသည်။ ဥပမာပြရပါက ယခင်က ဖောက်သည်များ၏ အပြုအမူကို
စုဆောင်းသိ မ်းဆ ည်နေ ရြ ခ င်းေြ ကာင့်
စူးစမ်း လေ့လာရာ၌ အချန်ိ များစွာ သုံးရသော ဖောက်သည်နှင့် တိုက်ရုက်ိမေးမြန်း
တစ်ြ ဖည်းဖြည်းကြီးထွားလာသည် မှာ အံ့ြ သစရာမဟု တ် ပဲ ၊ ထို အ စား မေးခွ န်းမှာ
အချက်အလက် ရယူမှုမှပုံစံမှနေ၍ ယနေ့ အချန်ိ တွင် လုပ်ငန်းရှင်သည် ဖောက်သည်ထံ
လက် ရှိ ၌ ကု မ္ပ ဏီ အ ဖွ့  အဲစည်းအများစု သ ည် မည် သ ည့် အ ချက် အ လက် မျုးများကို
လျင်မြန် လွယက်စွူာ ဖြင့် ဆက်သယွေ်ပြာဆိနုငိသ်ည့် ဆက်သယွေ်ရးပံစုံ နည်းဗျူဟာကို
သိမ်းဆည်းစုဆောင်းနေကြောင်းနှင့် Big Data ခေတ်အတွက် ၎င်းတို့ အဆင်သင့်
ပြောင်းလဲ ကျင့် သုံးလာနိုင်ြ ခင်းကြောင့် ကု န် ကျစရိ တ် ကို လျှော့ ချနိုင် သ ည့် အ ပြင်
ရှိနေပြီလား ဆိုသည်ပင် ဖြစ်သည်။
ရရိလှာသည့် အချက် အလက်များသည် ပိမုမို နှက်န်တကျိမှု ရိလှာကြောင်း တွေရ့  သည်။
23 JANUARY - MARCH 2017
အ ချက် အ လ က် ပ မာဏ
TECHNOLOGY ကုမ္ပဏီအဖွ့အဲစည်းအဆင့် အချက်အလက်သိမ်းဆည်းတွက်ချက်မှု Scale-Up ရှေးရိုးစွပဲုံစံ ကွန်ပျူတာ (သို့) စက်ကိရိယာ တစ်လုံးတည်းဖြင့် အချက်အလက် သိမ်း ဆည်း တွကခ်ျက်မသှုည် စက်ကရိယိာကို အဆင်ြ့ မှငတ့် င်မ၌ှုလွယ် ကူ မှုရှိေ စ သ ည် ။ ဥ ပ မာအ ချက် အ လ က် ပ မာဏ မျာြး ပား လာ၍ သိမ်းဆည်းမှုနေရာ မလုံလောက်တော့သည့်အခါ ပိုဝင်ဆန့်နုင်ိအောင် Storage အရွယ်ကို တိုးပေးခြင်း (သို့မဟုတ်) တွက်ချက်သည့်စက်ကိရိယာ နှေးကွေးမှု ဖြစ်လာပါက စက်သစ် တစ်စုံလုံးဖြင့် အစားထိုး အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း တို့ ဖြစ်သည်။ ၎င်းစနစ် ၏ ကောင်းချက် မှာ စရိ တ် ကို အတော် အတန် ချွေတာနိုင်ြ ခင်းနှ င့် အချက်အလက်စီးဆင်းမှု သိပ်မများသည့် ကုမ္ပဏီအဖွ့အဲစည်းအတွက် သင့်တော် နိုင်သော် လ ည်းBig Data အဆင့် အချက် အ လက် များအတွ က် မူ စနစ် မှာ လုံလောက်မှု မရှိတော့ပါ။ Scale-Out ကွန်ပျူတာ (သို့) စက်ကိရိယာ အလုံးများစွာဖြင့် အချက်အလက် သိ မ်းဆည်းတွ က် ချက် မှုပုံ စံ ဖြစ်ြ ပီး၊ လက် ရှိ ၌ အများမှ အထူးသဖြင့် အချက်အလက်စီးဆင်းမှု ပမာဏ များပြားသော ကုမ္ပဏီ အဖွ့အဲစည်းကြီးများ၌
မည် သို့  ပ င် ဖြစ်စေကာမူ အကယ် ၍ လု ပ် င န်းရှ င် မှBig Data စနစ် ကို
နှစ်သက်သုံးစွနေသည်ဲ့ ဤ Scale-Out ပုံစံသည် Big Data စနစ်နှင့် ဆောင်ယူ
ကုမ္ပဏီအဖွ့အဲစည်းအတွင်း စတင် ဆောင်ယူ သုံးစွရန်ဲအစီအစဉ်ရှပိါက စဉ်းစားရမည့်
သုံးစွ ရန်ဲသင့်တော် သ ည် ။ ၎င်းစနစ် ၏ ကောင်းချက် မှာ ကွ န် ပျူတာ (သို့  )
အရေးအကြီးဆုံးအချက်မှာ Development နှင့် Data Scientist လိုင်းကို ကောင်းစွာ
စက်ကိရိယာ တစ်ချုိ့ ပျက်စီး ချု့ယွိင်းမှု ဖြစ်သည့်တိုင်အောင် အခြားစက်များဖြင့်
နားလည်သည်လ့ပူဂုလ်္ဂိ အရင်းအမြစ် ဖြစ်သည်။ အကယ်ရှိရှိေနသည့် လူအရင်းအမြစ်ဖြင့်
စနစ်ကို ဆက်လက် လည်ပတ်စေနိုငြ် ခင်း ဖြစ်သည်။ အခြားအားသာချက် တစ်ခမှုာ
အဆိပုါ စနစ်ကို ဖြွ့ ဖိုံးဖော်ဆောင်လပိုါက ရောက်ရလှိာတော့မည့် ပြောင်းလဲမမျှုားအတွက်
ကွ န် ပျူတာ (သို့  ) စက် ကိ ရိ ယာအလုံးများစွာဖြင့်
အဆင် သ င့် ဖြစ်နေစေရန် ၎င်းတို့  ကို ကနဦးအချိန် က တည်းကပင် စောစီးစွာ
လု ပ် ကို င်စေခြင်းကြောင့်
လေ့ကျင့်မွမ်းမံမှုသင်တန်းသို့ ပို့ဆောင်တက်ရောက်စေခြင်း ဖြစ်သည်။
အချက်အလက်များကို လျင်မြန်စွာ စိစစ်တွက်ချက်နုင်ိစွမ်း ရှိခြင်း ဖြစ်သည်။
EXECUTIVE SUMMARY Information is considered asaresourceful factor for every business and activity, particularly in manufacturing business that using advance and vary technology. Nowadays, the ages of Big Data has begun, it is the ages that provide plenty of information which always transfer, exchange and forming upanew one through internal and external corporate’s networking all the time. The officer could compare and filter the information through proper condition to provide the accuracy result. To useaBig Data for manufacturing works or corporation could separate into3part which are 1. Internal Data This type of data is gathering from internal process or activity of an organization such as workforce detail, production plan, internal service or the analyzed data from each department. 2. External Data An essential data to provide for support and referable business’s performance. These data could acquire from organization, company, public sector or stores whether commercial or not and also international or domestic trading. 3. Personal Data Personal information, for example, personal data of customer, customer’s opinion or customer’s attitude to the product. Another condition to bring in Big Data to the organization is human resource. They must be acknowledged about the job in development and data analysis science greatly in order to manipulate the huge information to take any chance in the market.
24 MODERN MANUFACTURING MYANMAR EDITION
စက်မှုလုပ်ငန်း၌ မော်တာအမျိုးအစားများအသီးသီးနှင့် သုံးစွဲရန် AC Adjustable Speed Drives ကို ရွေးချယ်ခြင်း Choosing AC Adjustable Speed Drive for Motor in Manufacturing Works. စက်မလှုပုင်န်း၌ မော်တာအမျုးအစားများအသီိးသီးနှင့် သံုး စွရန်ဲAC Adjustable Speed
ယနေ့ခေတ်သုံးစွမှဲု အတွက် ခေတ်မအောင်ှီ ဖွ့ဖြိုံးတီထွင်ခြင်း ပိုမို မှန်ကန် တိကျသည့် ထိန်းချုပ်မှု ရရှိစေရန်အတွက် အနာလော့ခ်စနစ်အစား
Drives ကို ရွေးချယ်ခြင်း သ င့်တော် သ ည့်
မိကုခ်ရိုကနွထ်ရိုလာ သံုး စွ၍ဲ ဒီဂျတယ်ီထနိ်း ချုပ်မစှုမွ်း ရည် (Digital Control Capability)
လ ည် ပ တ် မှုအြ မ န်နှု န်းရ ရှိေ အာင် ထိ န်းချု ပ် သ ည့် န ည်းပ ညာသုံး၍ စ န စ် ၏
ပါရှိသည့်စနစ်ဖြင့် ထိန်းချုပ်လာကြသည်။ ဤစနစ်တွင် ပါဝါဖက်တာငြိမ်မှန်အောင်ပြင်
စွမ်းအင်ဆုံးရှုးမှုံနှင့် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပွတ်စားမှုများကို လျော့ကျစေနိုင်သည့်အပြင်
ဆင်မှုစနစ် (Built-in Power Factor Correction)၊ ရေဒီယိုအနှောင့်အယှက်စစ်ထုတ်
ပုံ စံ အသီးသီးပြောင်းလဲ ထိ န်းချုပ် နိုင်သော အမြန်နှု န်းထိ န်းချုပ် ဒ ရိုက် ဗ် တို့ြ ဖင့်
ဖီ လ် တာ(Radio Frequency Interference Filters: RFI)၊ ရှော့ ဆားကစ် မှ
စက်ယန္တရားများ၏ စွမ်းဆောင်ရည် အပြည့်အ၀ကို ရရှိစေသည်။
အကာအကွယလ်ျှ ပ်စစ်ပတ်လမ်း (Short Circuit Protection: Automatic Shutdown)၊
စ က် မှုလု ပ် င န်းတွင်း၌
စ က် ယန္တ ရား အား
မော်တာရိုတာအနေအထားထောက်လှမ်းမှုလျှပ်စစ်ပတ်လမ်း (Detect Motor Rotor အမြန်နနှုး ထိန်း ချုပ်ဒရိကုဗ်(် Adjustable Speed Drive: ASD) သည် စဉ်ဆက်မပြတ်
Position)၊ Motor Control Centers (MCC) နှင့် ASD တိအ့ု ကြား ကပ်ပလင်းညိင့ှု င်မြှု ဖင့်
တွက်ချက်လုပ်ဆောင် ခြင်းဖြင့် လည်ပတ်မှုအမြန်နှုန်းကို ထိန်းချုပ်ပေးသည့် ကိရိယာ
မော် တာ၏ လု ပ်ဆောင် မှုကို ရီးယဲ လ် တို င်းမ် စ နစ်ြ ဖင့် အချိန် မ ပြတ် စစ်ဆေးမှု
ဖြစ်ပြီး၊ ASD သည် ညှို့ငင်သည့်နည်း (သို့မဟုတ်) စင်ခရိုနပ်စ်နည်းအားဖြင့် မော်တာ၏
ပြုစေသည့်စနစ်၊ လွန်စွာနိမ့်သည့်လည်ပတ်နှုန်း၌ရှိ ၀င်ရုိး လိမ်အား(စက်နှုိး ထမှုဝင်ရုိး လိ
အမြန်နှု န်းကိုရော ၀င် ရိုး လိ မ် အားကို ပါပြောင်းလဲ ချန်ိ ညှိေ ပးနိုင် သ ည် ။ ထို့  အ ပြင်
မ် အား၏ 150% နှ င့် အ ထက် ) ဖြင့် စက် ကိုနှုးထစေခြင်ိး စသည့် လု ပ်ဆောင် မှုစ နစ်
ASD ကို Variable Speed Drives၊ Adjustable Frequency Drives (သို့မဟုတ်)
Variable Frequency Inverters ဟု အခြားအမည်များဖြင့် ခေါ်ဆိုကြသေးသော်လည်း ၎င်းတို့အားလုံး၏ အခြေခံလုပ်ဆောင်ပုံမှာ သုံးစွနေချဲန်ိ ကြိမ်နှုန်းချန်ိ ညှိပြောင်းလဲပေး သည့် ‘DC Drives’ များ၏လုပ်ေဆာင်ပနုံ ငှ့် သဘောတရားအရ အတူတပူင် ဖြစ်ပါသည်။
25 JANUARY - MARCH 2017
ELECTRICAL AND ELECTRICITY ‘Adj u s tab leS peedD r i ves ’ သ ည်ြ ပ န် လှန် လျှ ပ် စီးေ မာ် တာနှင့်
(သို့မဟုတ်) ဒီစီလျှပ်စစ်တွန်းအားတစ်ဆင့်မှ နောက်တစ်ဆင့် ဒီစီလျှပ်စစ်တွန်းအားသို့
တို က် ရိုက် လျှ ပ် စီးမော် တာ(AC/DC Motors) ကို ထိ န်းချုပ် ရာ၌သုံးသော
ပြောင်းပေးနိုင်သည့် ကွန်ဗာတာဆားကစ် ပတ်လမ်းဖြင့် ရယူထိန်းချုပ်မှု ပြုပါသည်။
အခြားအမျုးအစားဒရိကုဗ်တ်ထ့ို က် (Full Load ၌ 98%) ဖြင့် လုပ်ေဆာင်မစှုမွ်း ရည်တန်ဖိးု
ထို့အပြင် (Brushless DC Drives နှင့် Vector Controlled DC Drives) တို့ဖြင့်
အကောင်းဆုံး ဖြစ်ပါသည်။ အမြန်နှုန်းချန်ိ ညှိထိန်းချုပ်ဒရိုက်ဗ်(Adjustable Speed
အာမေချာကွုင်ိရှိ လျှပ် စီးအားနှ င့် လျှပ် စ စ် သံ လို က် လှိုင်းကို ထိ န်းချုပ်ြ ခင်းဖြင့်
Drive: ASD) (သို့) အမြန်နှုန်း ပြောင်းလဲထိန်းချုပ်ဒရိုက်ဗ်(Variable-Speed Drive:
တိကုရ်ကို လ်ျှ ပ်စီး မော်တာကို အလွနက်ျယ်ပြန်ေ့  သာ အတိငုး အတာရှိ အမြန်နနှုး များဆီသို့
VSD) သည် စက် မှုလု ပ် င န်းဆောင် တာ၏ လု ပ် င န်းစဉ် များ အသီးသီး၌ရှိသော
စက်ယန္တရားများ၏ အမြန်နနှုး ကို ထိန်း ချုပ်ပေးသည့် တာဝန်ကို ထမ်းဆောင်ပေးပါသည်။ ဥပမာ အခြားနည်းလမ်းသုံးမည့်အစား ဤဒရိုက်ဗ်ဖြင့် အလုပ်ပစ္စည်းအစိတ်အပိုင်းတပ် ဆင်မှုခါးပတ်လိုင်း၏ အမြန်နှုန်းကို ပြောင်းလဲထိန်းချုပ်၍ စွမ်းအင်ချွေတာခြင်း စသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်အမြန်နှုန်းထိန်းချုပ်မှုယန္တရားသည် အောက်ပု့တ်အထွက်ဖက်ရှိအ မြန်နှုန်းကိုလိုက်၍ မိမိဖာသာ ချန်ိ ညှိပြင်ဆင်ပြောင်းလဲမှု ပြုနိုင်ပြီး၊ ဤနည်းအားဖြင့် ပြောင်းလဲ မှုအ မြန်နှု န်းကို ‘ပြောင်းလဲ အ မြန်နှု န်း(သို့  ) Variable-Speed’ ဟု ခေါ်သည်။ စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး အဓိကအမြန်နှုန်းထိန်းချုပ်မှုကိရိယာအမျုးအစားများကို အောက်ပါအတိငုး ခွခြားနိဲငုသ်ည်။ ၎င်းတိမ့ှုာ ဗားဆိထ့ု နိ်း ချုပ်မ၊ှု Eddy Current Clutches၊ Hydraulic Couplings၊ Variable Pitch Sheaves၊ DC Solid State Controllers၊ AD Adjustable Speed Drives တို့ဖြစ်ပြီး၊ ဒရိုက်ဗ်များကို သုံးစွမှဲု စွမ်းအား (Horse Power၊ Voltage) လိုအပ်ချက်အရ 500 HP အားထက်နိမ့်သောအမျုးအစား၊ိ4kV နှင့်အထက် အားသံုး မော်တာပါရိသှည့် 2000 HP စွမ်း အား အလတ်စားအမျုးအစားဟိုခွခြားနိဲုငြ် ပီး၊ အသုံးပြုရာ၌ ဒရိုက်ဗ်၏ အောက်ပု့တ် အထွက်ဖက်တွင် ဒရိုက်ဗ်နှင့် မော်တာအကြား ထရန်စဖော်မာ ကြားခံထားလျက် တွဆက်ဲသည့် (Common Mode Voltage) ပုံစံဖြင့် သုံးနိုင်သည်။ ‘Variable Frequency AC Drives’ စနစ်တွင် အပူကိုကျဖြန်ဲ့ခြင်းဖြင့် စနစ် ပျက် စီးမှု မှ
ကာကွ ယ်ပေးနိုင်သော ထိ န်းချုပ် ပုံးထဲ ၌ လျှပ် စ စ် ပ တ် လ မ်းနှ င့်
အစိတ်အပိုင်းများစွာအား ထည့်သွင်းလျက် ပုံ(1)ပါ အတိုင်း လုပ်ဆောင်စေပါသည်။
ပုံ(1). ‘Variable Frequency Drive/Motor System’ ၏လုပ်ဆောင်မှုစနစ်ပြပုံ
စနစ်၏ လုပ်ဆောင်ပုံမှာ - မော်တာ၏ လုပ်ဆောင်မှုကို ထိန်းချုပ်ရန်အတွက် AC နှင့် DC ဒရိုက်ဗ် နှစ်မျုိး စလုံးသည် စွမ်းအားပင်ရင်းမှ ပေးပို့သည့် ပြန်လှန်လျှပ်စီးကို သုံးပြီး၊ ၎င်း၏အထွက်အောက်ပု့တ်၏ လျှပ်စီးဗို့အားကို ပြောင်းလဲပေးခြင်းဖြစ်သည်။ DC ဒရိုက် ဗ် အ မျုးအစားကို တို က် ရိုက် လျှ ပ် စီးမော် တာအား ထိ န်းချုပ် ရာ၌ သုံးပြီး၊ AC ဒရိုက်ဗ်အမျုးအစားကို ပြန်လှန်လျှပ်စီးညှို့ငင်အားသုံးမော်တာအား ထိန်းချုပ်မှု၌ သုံးသည် ။ တို က် ရိုက် လျှ ပ် စီးမော် တာ၏ လည် ပ တ်နှု န်းသည် အာမေချာကွုင်ိရှိ လျှပ်စီး ဗိအ့ုားနှင့် တိကုရ်ကို အ်ချုးကျသဖြင်ိ့ ၎င်းမော်တာအမျုးအစားကို ထိန်း ချုပ်ရမှုသည် အလွယ်ကူဆုံးဖြစ်ကာ၊ မော်တာကို လူအများသုံး အီလက်ထရောနစ်ပတ်လမ်းစနစ်ဖြင့် ချ န်ိ ညှိထိ န်းချုပ်လေ့ ရှိြ ပီး၊ တို က် ရိုက် လျှ ပ် စီးဗို့  အားကို ရက် တီ ဖို င် ယာဆားကစ်
26 MODERN MANUFACTURING MYANMAR EDITION
ELECTRICAL AND ELECTRICITY AC DRIVES EDDY CURRENT CLUTCHES ‘Eddy Current Clutches’ သည် စနစ် ၏ အားပေးပို့  မှုစ နစ် ကို ဆက် သွယ် ဖြတ်တောက်ပေးရာ၌ သုံးသည့် ကိ ရိ ယာပစ္စ ည်းဖြစ် ၍ ၊ စက် ကိ ရိ ယာတစ် ခု မှေ နာက် တ စ် ခု သို့  အား ကိုပေးပို့  /ြ ဖ တ်တောက် မှု( သို့  မ ဟု တ် ) စ န စ် ၏ စွမ်း အားပေးပိမ့ု စှုနစ်မှေန၍ ကျန်အပိငုး ကို ဖြတ်တောက်ပစ်ရန်အတွက် သံုး လေ့ရသှိ ည်။ ၎င်း၏လုပ်ဆောင်ပုံမှာ လျှပ်စစ်သံလိုက်စက်ကွင်းညှို့ငင်မှုနှင့် သံလိုက်နှင့်ကွိုင်ထုပ်၏ နှိုင်းရရွှေ့ လျားမှုမှေ န ၍ ထွက်ပေါ် လာသ ည့် လျှ ပ် စီး
ေ နာက်ြ ပ န် ညှို့  င င် မှု
အခြေခံ သ ဘောတရားကို သုံးစွ ထားသည်ဲ။ ဤကိ ရိ ယာသည် လည် ပ တ်နှု န်းအလယ်အလတ်မှ မြင့်မားသည့် လည်ပတ်နှုန်းရှိသော အလတ်စားဝန်အားစနစ်များနှင့် သင့်တော်၍ စံထားလျှပ်စစ်ညှို့ငင်မော်တာများကို ထိန်းချုပ်ရာ၌ သုံးသည်။ ‘Eddy Current Clutches’ ၏ပြင်ပတည်ဆောက်ပုံနှင့် ပါဝင်အစိတ်အပိုင်းများကို ပုံ(2)တွင် ပြထားပါသည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ ဤကိရိယာပစ္စည်းသည် ASDs ဒရိုက်ဗ်များထက် လုပ်ဆောင်နုင်ိမှုစွမ်းရည် ပိုနည်းပြီး၊ ဆောင်ယူအသုံးချရာ၌လည်း ကန့်သတ်ချက်များ ရှိပါသည်။
ပုံ(3). Switched Reluctance Motor ၏ သံလိုက်ဝင်ရုိး များနှင့် ပြင်ပတည်ဆောက်ပုံ VECTOR DRIVE ‘Vector Drive’ အေစီမော်တာအမျုးအစားကို ထိန်း ချုပ်ပမှုာံ ဒီစေီမ်ာတာ၏ အမြန်နနှုး ၀င်ရုိး လိမ်အားနှင့် မြင်ကောင်ရေအားကို ထိန်းချုပ်ပုံနှင့် ဆင်တူပြီး၊ အဆိုပါဒရိုက်ဗ်ကို မြန်နှု န်းအမြင့် ၌ မောင်းနှ င်သည့် အခါ လိ မ်အား အပြည့် အ၀ကို ထု တ်ေ ပးနိုင်သည် (မော်တာသည် လိမ်အားအပြည့်နှင့် လည်ပတ်နှုန်းအနိမ့်၌ ထွက်ပေါ်လာသည့် အပူကို ထိန်း ချုပ်နုငိရ်မည်) သိရ့ုာတွင် ဤဒရိုကဗ်အ်မျုးအစား၌ိရှုပ်ေထွးသောအီလစ်ထရောနစ် အစိတ်အပိုင်း ဥပမာ ဆာဗိုမော်တာရှိ လျှပ်စစ်ဖေ့စ်အနေအထားကို တွက်ချက်နုင်ိရန် ဒီ ဂျယ် တ ယ် အ ချက် အ လက် တွက် ချက် မှုစ နစ် (ခေါ်) DSPs ပတ် လ မ်းစသည် တို့  ပါရှိဒီဇိုင်းထုတ်ထားပါသည်။ စက်၏ အခြေခံလုပ်ဆောင်မှုသဘောတရားမှာ အာမေချာ လျှပ်စီးအားပမာဏနှင့် လားရာကို အတူ
ပေါင်းစည်းထားသော ဗက် တာအားကို သုံး ၍ ၀င် ရုိး လိ မ်အားကို
ေြ ပာင်းလဲ ထိ န်းချု ပ်စေြ ခ င်ြး ဖ စ် သ ည် ။ ထို့  အြ ပ င် စ လိ အြ မ န်နှု န်းနှင့်မော် တာအြ မ န်နှု န်းကို အ င် ကု တ် ဒါ( E n c ode r )ြ ဖ င့် စ စ်ဆေးထိ န်းချု ပ် ၍ ပြောင်းလဲစေပါသည်။ လူသုံးများသော စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး စင်ခရိုနပ်စ်မော်တာများ၌ ဗက် တာဒရိုက်ြ ဖင့် မက် ဂ နီ တို က် စ င်းလျှပ် စီးအားနှ င့် စလိ တ န် ဖိုးကို ဖယ် ရှား၍ ပုံ(2). ‘Eddy Current Clutches’ ၏ ပြင်ပတည်ဆောက်ပုံနှင့်
ထိ န်းချုပ်စေလေ့ ရှိ ပါသည် ။ Vector Drive ၏ လု ပ်ဆောင် မှုသ ဘောတရားကို
ပုံ ( 4)တွ င် ပြထားပါသည် ။ Speed Regulator ဘလောက် တုံးသည် ပြင် ပ မှ ပေးပို့  သ ည့် အ ချက် အ လက်ြ ဖင့် အမြန်နှု န်းထိ န်းချုပ် မှုတာဝန် ကို ထမ်းဆောင် ၍ ၊
ပုံရယူမှုရင်းမြစ် : http://www.superstreetonline.com/how-to/additional-tech/
၎င်းမှထွက်လာသည့် အချက်အလက်များကို နောက်တစ်ဆင့်အဖြစ်2ဖေ့စ် မှ 3ဖေ့စ်
(2 Phase/3Phase) အချက်အလက်ပြောင်းလဲမှု ဘလောက်တုံးသို့ ပေးပို့ပါသည်။ ထို မှတ စ် ဆ င့် အချက် အ လက် များကို လျှပ် စီးထိ န်းညှိ( Current Regulator) ဘလောက် တုံးသို့  ဆက် လ က်ပေးပို့  ပါသည် ။ လျှပ် စီးထိ န်းညှိဘ လောက် တုံးတွ င်
SWITCHED RELUCTANCE DRIVES စ ၀ိ ခ်ျရီ လ ပ် တ င်းစ်မော် တာ( Sw i t c hed Re l u c tan ce: S R M o t o r ) ၏
ေ မာ် တာအြ မ န်နှု န်းစ စ်ဆေးသ ည့် အ င် ကု တ် ဒါ( E n c ode r ) အ ကူ အ ညီြ ဖ င့်
အပိ တ် ပ တ် လ မ်းထိ န်းချုပ် မှုစ နစ် (Closed-Loop Control) ဖြစ် ၍ ၊ မော် တာ
မော်တာလည်ပတ်နှုန်းအနေအထားကို ဒေတာအချက်အလက်အဖြစ် ပြောင်းလဲယူ၍
အတွ င်းပို င်းတည်ဆောက် မှုစ နစ် မရှု ပ်ထွေးသလို တပ် ဆ င် ထု တ် လု ပ် မှုလ ည်း
စနစ်၏ အ၀င်အင်ပု့တ်ဖက်ရှိဖလပ်စ်တန်ဖိုးကို သတ်မှတ်ထိန်းချုပ် စေပါသည်။
လွ ယ် ကူ သ ည် ။
မော် တာတည်ဆောက် မှုသုံးအဓိ က ပစ္စ ည်းများမှာသံြ ပားနှ င့်
ကြေးနီဝါယာကြိုးများသာ ဖြစ်သည့် အတွက်ကြောင့် စ၀ိချရီ် လပ်တင်းစ်မော်တာကို
ယနေ့ခေတ်တွင် စရိတ်နည်းနည်းသာ သုံးလိုသော စက်မှုလုပ်ငန်းအလုပ်များ ဥပမာ ရေစု ပ် စ က် ပ န် ကာ၊ လေအေးပေးစက် ၏ အအေးပေးကွ န် ပ ရက် ဆာစသည် တို့  ၌
2 Phase to3Phase
သုံးစွကြသည်ဲ။ စ၀ိချရီ် လပ်တင်းစ် မော်တာ၏ လုပ်ဆောင်ပုံအခြေခံသဘောတရားမှာ Flux Command
စနစ်မှ သံလကို တ်နွ်း ကန်အားကို လျော့ပါးစေရန် အားထုတရ်ာ၌ သံလကို ပ်တ်လမ်းမှနေ၍ ထွက်ပေါ်လာသည့် ရီလပ်တင်းစ်အားကို သုံးစွကဲာမော်တာကို လည်ပတ်စေခြင်း
ဖြစ်သည်။ Switched Reluctance Motor ၏ သံလိုက်ဝင်ရုိး များနှင့်အတူ ဒရိုက်ဗ်နှင့် တွဆက်ဲထားသည့် ပြင်ပတည်ဆောက်ပုံကို ပုံ(3)တွင် ပြသထားပါသည်။
ပုံ(4). Vector Drive ၏ လုပ်ဆောင်မှုဘလောက်ပုံစံ
27 JANUARY - MARCH 2017
ELECTRICAL AND ELECTRICITY WOUND-ROTOR MOTOR CONTROLLERS ‘Wound-Rotor Motor’ ကို အမြန်နှု န်းချ န်ိ ညှိထိ န်းချုပ် ဒ ရိုက် ဗ် ( Adjustable Speed Drive: ASD) (သို့မဟုတ်) တစ်ချု့အမျိုးအစား၌ိအမြန်နှုန်းပြောင်းလဲထိန်းချုပ် ဒရိုက်ဗ်(Variable-Speed Drive: VSD) ဖြင့် ထိန်းချုပ် လုပ်ဆောင်စေနိုင်ပါသည်။ AC Adjustable Speed Drives သည် စက်မှုလုပ်ငန်း အမြန်နှုန်းထိန်းချုပ်မှု လောကတွင် ကျယ်ြ ပန့်  စွာ ပါဝင် ပ တ် သ က်နေပါသည် ။ ဤအမျုးအစားကိရိ ယာကို နှ စ်ပေါင်း(20)ကျော်ကြာ တွငက်ျယ်စွာ အသံုး ပြုလာခြဲ့ ကပြီး၊ မော်တာပန်ခ့်ပန်ကာ ကွနပ်ရက်ဆာ မှအစ ရှုပ်ထွေးသော လုပ်ဆောင်မှုရှိ စက်ယန္တရားများအထိ စနစ်များတွင် ၎င်းကို ထိန်းချုပ်ဒရိုက်အဖြစ် အသုံးပြုနိုင်သည်။ ၎င်းသည် Solid State Electronic Devices မှတစ်ဆင့် မော်တာများထံသို့ ပြန်လှန်လျှပ်စီး၏ ကြိမ်နှုန်းကို ပြောင်းလဲပေးပို့ခြင်းဖြင့် လု ပ်ဆောင် ပါသည် ။ ဤစနစ် သ ည် ဈေးနှု န်းအတော် အ တန် မြင့်သော် လ ည်းစိ တ် ချရသည့် စွ မ်းဆောင် ရ ည်နှ င့် တိ ကျမှု ကို ပေးစွ မ်းနိုင်ြ ပီး၊ လု ပ် င န်းများစွာ၌ ယုံကြည်အားထားစွာ သုံးကြသည့်အပြင် စွမ်းအင်ချွေတာနိုင်ခြင်းကြောင့်
ပုံ(5). AC Adjustable Speed Drives အမျုးအစားများအသီိးသီး
ရင်းနှီးမြှုပ်နမှုံ အတွက် အနာဂတ်၌ အရင်းကျေတွက်ချေကိုက်မှု ရှိစေပါသည်။ ARIABLE VOLTAGE CONTROLLERS ‘Variable voltage controllers’ ဆိုသည်မှာ လျှပ်စစ်ဗို့အားကို ပြောင်းလဲခြင်းဖြင့် မော် တာ၏ လည် ပ တ် မှုကို တို က် ရိုက် ထိ န်းချုပ်ြ ခင်းဖြစ် ၍ ၊ ညှို့ င င်မော် တာများ၌ အသုံးများသည် ။ မော် တာ၏အမြန်နှု န်းကို ခြားနားသော လျှပ် စ စ် ဗို့  အားဖြင့် တိုက်ရုက်ိထိန်းချုပ်ပြီး၊ မြန်နှုန်းမြင့်မြင့်၌ သင့်တော်သည့် အမြန်နှုန်းအပိုင်းအခြားကျဉ်း များဖြင့် ထိန်းချုပ်သုံးစွရာ၌ဲစွမ်းရည်ကောင်းမွန်မှုရှိစေရန် တန်ဖိုးအလွန်မြင့်သော မော်တာစလိတန်ဖိုးကို သုံးစွရသည်ဲ။
28 MODERN MANUFACTURING MYANMAR EDITION
ELECTRICAL AND ELECTRICITY VARIABLE FREQUENCY DRIVES
‘Variable Frequency Drives’ ဆိုသည်မှာ လျှပ်စီးကြိမ်နှုန်းကို ပြောင်းလဲခြင်းဖြင့်
မော်တာ၏ လည်ပတ်မှုကို ထိန်းချုပ်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ကွပြားသည်ဲ့မော်တာအမြန်နှုန်း
Speed Reference from Process
အ တွက် ကြွဲပား သ ည့် လျှ ပ် စီြး ကိ မ်နှု န်းကို ထု တ်ပေးကာထိ န်းချု ပ်ြ ခ င်းဖြစ် ၍ ၊ AC မော် တာ၏ အမြန်နှု န်းကို ထိ န်းချုပ် ရာ၌ အသုံးများသည် ။ ထို့  အ ပြင်
အတော်အတန် တည်ငြိမ်သော သတ်မှတ်လျှပ်စစ်ကြိမ်နှုန်းဗို့အားအချုးအစာိး(V / RECTIFIER
Hz) တန်ဖိုးရရှိစေရန်အတွက် ဒရိုက်ဗ်သည် အထွက်အောက်ပု့တ်လျှပ်စီးဗို့အားကိုပါ
Constant Frequency Constant Voltage AC Power Supply
ထိန်း ချုပ်ပြောင်းလဲပေးပါသည်။ ဒရိုကဗ်က်ို အပိတထ်နိ်း ချုပ်မှု (Closed-Loop Control) ပုံ စံြ ဖင့် AC မော် တာအတွ က် လုံလောက်သော ၀င် ရိုး လိ မ် အားထု တ်ပေးနိုင်သော လည် ပ တ်နှု န်းရရှိအောင် ထိ န်းချုပ် ရာ၌ သုံးပါသည် ။ အပိ တ် ထိ် န်းချုပ် မှုပုံ စံ တွင်
Fixed or Variable DC Voltage
INVERTER (Switching Section) Variable Frequency Variable Voltage AC Power Output
မော်တာအား ပေးပိေ့ု သာ လျှပ်စစ်အားနှင့် ကြိမန်နှုး ပြောင်းလဲမမှု တြုံ့ ပန်ချက်တန်ဖိးု အရ ပေးသွ င်းမှု လို အ ပ် ချက် ကို ပြောင်းလဲစေခြင်းဖြင့် မော် တာ၏ အမြန်နှု န်းကို အကျုးသက်ိရောက်မှု ဖြစ်စေပါသည်။ ကြိမ်နှုန်းပြောင်းလဲမှုဖြင့် မော်တာ၏ အမြန်နှုန်း ထိ န်းချုပ် မှုန ည်းလမ်းသည် သတ် မှတ် အ မြန်နှု န်းထက် နိ မ့် ကျသောနှု န်းထားနှ င့် မြင့် မားသောနှု န်းထားများ၌ပါ အမြန်နှု န်းကို အစဉ် မ ပြတ် ထိ န်းချုပ်ပေးနိုင် သ ဖြင့် ယနေ့ခေတ်၌ လူသုံးများသည့်နည်းလမ်း ဖြစ်ပါသည်။ သုံးစွသဲူမှစတေ တာ၏ လျှ ပ် စ စ်ြ ကိ မ်နှု န်းကိုလျှော့ ချလို က် သ ည့် အ ခါလျှပ်စစ်ဗို့အားနှင့် ကြိမ်နှုန်းအချုိး တန်ဖိုးကို တည်ငြိမ်သည့်နှုန်းထား၌ ရှိစေရန်အတွက် စတေတာ၏ ဗို့အားကိုပါ လျှော့ချရန် လိုအပ်လာပါသည်။ သို့မဟုတ်ပါက စတေတာ၏ သံ ထ ည် ၀ င် ရိုး သည် ပြည့် ၀ အနေအထားသို့  ရောက် ရှိြ ပီး၊ ပုံ မှန် ထ က် လျှပ် စီးအား ပိုများစေကာ မော်တာကို ပျက်စီးစေနိုင်ပါသည်။ ကြိမ်နှုန်းအချုးကို တည်ငြိမ်အောင်
ပုံ(6). (A) ၊ (B) ‘Adjustable Frequency Inverter System’
ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် မော်တာ၏ သံလိုက်စက်ကွင်းကို တည်ငြိမ်သည့်နှုန်းထား၌ ရှိစေကာ
မော် တာ၏ အမြင့် ဆုံးလိ မ် အားကို မည် သ ည့် အ ချိန် ၌ မဆို တည်ြ ငိ မ်စေပါမည် ။ မည်သပ့ို င်ဖြစ်စေ အကယ်၍ သံုး စွမှဲု ကြိမန်နှုး သည် အလွနန်မိက့်ျသည်တ့န်ဖိးု ၌ ရှိေနပါက၊
ပုံရယူမှုရင်းမြစ် : http://www.ecvv.com/product/4052000.html
စတေတာခု ခံ မှုအားကြောင့် ကျဆင်းသွားသည့် အားကို အစားထိုးဖြည့်ပေးနိုင် ရ န် (Stator Resistance Compensation) အတွက် သတ်မှတ်ကြိမ်နှုန်းထက်မြင့်သော
သုံးစွ သဲူသ ည် မည် သ ည့် ဒ ရိုက် ဗ် အ မျုးအစားပိုံ စံ ကို ရွေးချယ် သုံးသည်ြ ဖစ်စေ
ကြိ မ်နှု န်းရရှိစေရန် ကြိ မ်နှု န်းအချုးကို သုံးစွ သဲူမှတိုးမြှ င့်ပေးရန် လို အ ပ် ပါသည် ။
မော်တာအမျုးအစားကို အဓိကစဉ်းစားရန်အချက်အဖြစ်ထားပြီး၊ စက်ယန္တရား၏ စွမ်း
ဤဖြစ် စ ဉ် ၌ စတေတာ၏ သံ လို က် စ က် ကွင်းအားကျဆင်းမှုကြောင့် မော်တော် ၏
အင်ချွေတာလုပ်ဆောင်ပေးနိုင်မှုစွမ်းရည်ကို သုံးစွရမည်ဲ့ ဘတ်ဂျက်ကုန်ကျစရိတ်ဖြင့်
အမြင့်ဆုံးလိမ်အားကိုပါ ကျဆင်းသွားစေနိုင်သဖြင့် စတေတာ၏ လျှပ်စစ်တွန်းအားကို
ချင့် တွက်ြ ပီးရွေးချယ် သ င့် သ ည် ။ ထို့  အ ပြင် စက် မှုလု ပ် င န်းရင်းနှးမြှီုပ်နှ မှုံ ၌
တိုးမြှ င့်ပေးရန် မဖြစ် နိုင် ပါ။ Adjustable Frequency Inverter System ၏
စက်ယန္တရားကို မသင့်တော်စွာ သုံးစွရာမှဲပျက်စီးယိုယွင်းသွားနိုင်မည့်ကာလကိုပါ
အပိတ်ထိန်းချုပ်မှုစနစ်ပုံစံကို ပုံ(6)တွင် ပြသထားပါသည်။
နောက်ပင်မအချက်တစ်ခုအဖြစ် ထည့်သွင်းစဉ်းစား ဆုံးဖြတ်သင့်သည်။
EXECUTIVE SUMMARY Adjustable Speed Drive: ASD, the equipment to control speed continuously. ASD could control speed and torque induction or synchronous motor. It could be called by various name such as Variable Speed Drives, Adjustable Frequency Drives or Variable Frequency Inverters. However, the fundamental of it is the same one as ‘DC Drives’ that change the frequency while operating. AC type: 1. Eddy Current Clutches,atransmission that fit for medium work with medium or high speed. 2. Switched Reluctance Drives, with Closed-Loop Control system that has simple structure. Suitable for low budget manufacturing. 3. Vector Drive, summarized of Armature current into Vector to control torque. The slip and motor speed will be verified with encoding procedure 4. Wound Rotor Motor Controller, with variable speed controller, this type could applied with many area of works from drive motor pump to complex machinery by adjust the electrical frequency and send it to Solid State Electronic Device 5. Variable Voltage Controllers, control motor’s spin with electrical pressure, famous with induction motor. 6. Variable Frequency Drives, control motor’s spin by frequency adjustment. This type is famous with AC motor type with different frequency and it also has Closed-Loop Control that could manage the speed continuously for lower and higher than standard used.
29 JANUARY - MARCH 2017
INDUSTRIAL MACHINERY & EQUIPMENT အီနှင့် စက်အစိတ်အပိုင်းများတို့၏ဒိုင်ရိတ်တောရီ
FLOW & FLUID POWER COMPONENTS:
၃။ စီးခြင်းနှင့် ဖလပ်မှုန့်၏အစိတ်အပိုင်းများ လေဖိသိပ်စက်များ၊ လေပိုက်လုံးများ၊ ကြားဆ
က်ပစ္စည်းများ၊ ဂတ်စကတ်နှင့် ပင်လယ်ဖျံများ၊
လျှပ်စစ်နန်းကြီး (နှင့်) လျှပ်စစ်ကြေးနန်း၊
လျှပ်စစ်ပစ္စည်းကိရိယာ၊ လျှပ်စစ်မော်တာ စက်များ၊ လျှပ်စစ်၏လုံခြုံမှုစနစ်၊ အီလက် ထရွန်နစ်ပစ္စည်းကိရိယာ၊ မီးအားပေးစက်များ၊ ခလုတ်ဘုတ့်ပား (နှင့်) ခလုတ်ပိုင်ဆိုင်းစက်နှင့် မပြတ်မတောက်ပေးသွင်းခြင်း (UPS) တို့စသ ည်ဖြင့် ဖြစ်ပါသည်။
MODERN MANUFACTURING SPECIAL EDITION
While every effort has been made to ensure that the information contained herein is comprehensive and accurate, the publisher will not accept any liability for omissions or errors. Should there be any inaccuracies, please write to our marketing department: info@ greenworldmedia.co.th. ဤအချက်အလက်အားလံုး သည် ပြည်စ့နုံ ငှ့် မှနက်န်တကျိေ သာအချက်အလက်ရပ်ှိ သည်။ ဟု ကျွန်တော်သည် မျှော်လ င်ထ့ားပါသည်။ ဤအချက်အလက်မှားယင်းချကါ (သိမ့ု ဟုတ)် ထိန်းချန်ခြင်းများရှရင်ိသင်သည် အမှားအယင်းများတို့ကို ကြားပြောနိုင်ပါမည်။ ကျွန်တော်တို့၏ဈေးကွက်ရှာဖွေရေး ဦးစီးဌာန၏အီးမေးလ် ဆက်သွယ်နုင်ိပါသည်။ အီးမေးလ်။
DIRECTORY OF INDUSTRIAL MACHINERY & EQUIPMENT
FLOW & FLUD POWER COMPONENTS Air Compressors, Air Ducts, Couplings, Gaskets & Seals, Hydraulic Equipment, Pipes (Plastic / Rubber / Stainless / Steel), Pneumatic Equipment, Pumps, Valves ABEX HYDRAULICS & ENGINEERING CO., LTD. 100 Moo4Soi Wat Saothongklang Bangna-Trad Road (Km.23) Bangsaothong, Bangsaothong Samutprakarn 10540 Thailand Tel: (66) 2397 9200 Email: info@abexhyd.com Website: www.abexhyd.com
ADEKOM KOMPRESSOREN (THAILAND) CO., LTD. 133 Kanchanapisek Road Samae Dam, Bang Khun Thian Bangkok 10150 Thailand Tel: (66) 2453 2374 to5Email: info@adekom-thailand.com Website: www.adekom-thailand.com
AEROFLUID CO., LTD. 169/4, 169/5 Moo 1 Rangsit-Nakornnayok Road Lampakkud, Thanyaburi Pathumthani 12110 Thailand Tel: (66) 2577 2999, (66) 8 1359 9155 (66) 8 6055 0026 Email: info@aerofluid.com Website: www.aerofluid.com
ALPHA CONTROMATIC CO., LTD.9Soi On-Nut 62 Sukhumvit 77 Road Suan Luang, Suan Luang Bangkok 10250 Thailand Tel: (66) 2721 1801 Email: sales@alphac.co.th Website: www.alphac.co.th
ALTER AIRCONDITIONING CO., LTD. 99/5 Moo 20 Lam Luk Ka Pathumthani 12150 Thailand Tel: (66) 2023 4172 to 4, (66) 8 1582 1818 Email: sales@alter.co.th Website: www.alter.co.th
ATLAS COPCO (THAILAND) CO., LTD. 125 Wellgrow Industrial Estate Moo9Bangna-Trad (Km.36) Road Bangwua, Bangpakong Chachoengsao 24180 Thailand Tel: (66) 3856 2900, (66) 8 1826 0679 Website: www.atlascopco.co.th
BITWISE (THAILAND) CO., LTD. 25/12 Moo 20 Theparak (Km.12) Bangpleeyai, Bangplee Samutprakarn 10540 Thailand Tel: (66) 2312 3995 Email: info@bitwise.co.th Website: www.bitwise.co.th
55/29 Moo3Lampho, Bangbuathong Nonthaburi 11110 Thailand Tel: (66) 2525 8630 Email: bsn.chemtai@gmail.com Website: www.chemtai.com
89/1 Kasemsap Building, 4th Floor, Vibhavadi-Rangsit Road Chom Phon, Chatuchak Bangkok 10900 Thailand Tel: (66) 2511 5300 Email: chalalaikwansuwan@eaton.com Website: www.eaton.co.th
115 Soi 62/1 Sukhumvit Road, Bang Chak, Phra Khanong Bangkok 10260 Thailand Tel: (66) 2332 5555 (AUTO 22 LINES) Email: sirichai@btacia.co.th Website: www.btacia.co.th
555 Rasa Tower 2, 14th Floor, Unit 1401-1402 Phaholyothin Road, Chatuchak Bangkok 10900 Thailand Tel: (66) 2937 1190 Email: emersonprocess.thailand@emerson.com Website: www.emersonprocess.com
29/10 Moo7Soi Poolchareon Bangna-Trad Road Bangchalong, Bangplee Samutprakarn 10540 Thailand Tel: (66) 2337 0360 Email: info@busch.co.th Website: www.busch.co.th
71/296 Soi Ramkhamhaeng 164 Ramkhamhaeng Road, Min Buri Bangkok 10510 Thailand Tel: (66) 2372 7302 Email: info@encotecthai.com Website: www.encotecthai.com
164/1 Wisutkasat Road, Bangpanthom, Pranakorn Bangkok 10200 Thailand Tel: (66) 2281 5331, (66) 8 6973 7268 Email: Info@crm.co.th Website: www.crm.co.th
4th Floor. Boonyium & Associates Bldg., 1314-1322 Srinakarin Road, Suan Luang Bangkok 10250 Thailand Tel: (66) 2322 1678 to 87 Email: epmc@epmc.co.th Website: www.epmc.co.th
125 Wellgrow Industrial Estate Moo9Bangna-Trad Road (Km.36), Bangwua, Bangpakong Chachoengsao 24130 Thailand Tel: (66) 3856 2900 Email: aritutch.ariyaphitanant@cp.com Website: www.cp.com
6 Ngamwongwan3Junction 5, Ngamwongwan Road Bangkrasor, Muang, Nonthaburi 11000 Thailand Tel: (66) 2952 6725 to6Email: center@extravalue.co.th Website: www.extravalue.co.th
56 Moo2Soi Kanchanaphan, Bangplee-Tamru Road Phraeksamai, Muang Samutprakarn 10280 Thailand Tel: (66) 2136 2317 Email: natcha.r@conquest.co.th Website: www.conquest.co.th
44/16 Moo3Chimplee, Taling Chan Bangkok 10170 Thailand Tel: (66) 2448 8100 Email: sales@flomatic-valves.com Website: www.flomatic-valves.com
COPCO CHEMTECH CO., LTD. 89/76 RK Park Hathairath Road Bangcha, Khlong Sam Wa Bangkok 10510 Thailand Tel: (66) 2171 5391 Email: coct@copcochemtech.co.th Website: www.copcochemtech.co.th
CPM ENGINEERING CENTER CO., LTD. 559/26 Moo 7, Bangpleeyai, Bangplee Samutprakarn 10540 Thailand Tel: (66) 2325 0321 to3Email: info@cpmflow.com Website: www.cpmflow.com
DINDAN TECHNICAL CO., LTD. 27 Soi Luan-Jeur-Arnusorn 2, Sukhumvit Road Bangna, Bangkok 10260 Thailand Tel: (66) 2753 4212 Email: dindan@dindan-tech.com Website: www.dindan-tech.com
31 JANUARY - MARCH 2017
FLOWLUTION CO., LTD. 26/48 Moo4Suksavahd Road Chom Thong, Bangkok 10150 Thailand Tel: (66) 2877 3223 Email: info@flowlution.com Website: www.hofhydraulic.com
GLOBAL FLOW TECH CO., LTD. 94/1 Moo 8 Poochaosamingprai road Sumrong Tai, Phra Pradaeng Samutprakarn 10130 Thailand Tel: (66) 2676 2299 Website: www.gft.co.th
GLOBAL SEAL CO., LTD. 490 Thetsaban Rangsan Nua Soi 10 Road Ladyao, Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand Tel: (66) 2953 8840 to 8 Email: phuwasa.k@globalseal.co.th Website: www.globalseal.co.th
DIRECTORY OF INDUSTRIAL MACHINERY & EQUIPMENT HARCUS RUBBER CO., LTD.
8 Soi Ladkrabang 38 Ladkrabang, Ladkrabang Bangkok 10520 Thailand Tel: (66) 2326 9924 to 49 Email: contact@harcusrubber.com Website: www.harcusrubber.com
555/119 On-Nut Road Prawet Bangkok 10250 Thailand Tel: (66) 2328 6674 Email: sales@merz-thailand.com Website: www.merz-thailand.com
88/153 Moo 10 Bangkaew, Bangplee Samutprakarn 10540 Thailand Tel: (66) 2181 2317 Email: Mr.Karcher@karcherthai.com Website: www.proshopthai.com
HATYAI P.M. CONTROL LTD., PART. 220/9 Moo 12 Tachang, Bangklam Songkla 90110 Thailand Tel: (66) 7455 4447 to 8 Email: sale@hatyaipm.com Website: www.hatyaipm.com
HOF CORINDUS CO., LTD. 891 Rama3Road, Bangpongpang, Yan Nawa Bangkok 10120 Thailand Tel: (66) 2284 1100, (66) 8 9921 4578 Email: info@hofcorindus.co.th Website: www.hofcorindus.co.th
HYDRAULIC & PNEUMATIC SOLUTIONS CO., LTD. 420/3 Sathupradit Road, Bangpongpang, Yan Nawa Bangkok 10120 Thailand Tel: (66) 2674 0292 to3Website: www.hydraulic-pneumatic.co.th
KANIT ENGINEERING CO., LTD. 800/3-4 Asoke-Din Daeng Road, Din Daeng Bangkok 10400 Thailand Tel: (66) 2642 8762 to4Website: www.kanitengineering.com
KC MAHANAKORN CO., LTD. 141, 143 Narathiwat-Ratchanakarin Road Chong Nonsi, Yan Nawa Bangkok 10120 Thailand Tel: (66) 2678 2530 to 40 Email: info@kcbkk.com Website: www.kcbkk.com
MAGNA INTERNATIONAL CO., LTD. 58 Soi Bangwaak 37 Bang Waek Road Bang Waek, Phasi Charoen Bangkok 10160 Thailand Tel: (66) 2865 2501 to 8 Email: admin@magna.co.th Website: www.magna.co.th
N.C.R. RUBBER INDUSTRY CO., LTD. 69, 71-73 Bamrungrat Road Sampanthawong Bangkok 10100 Thailand Tel: (66) 2225 7656 to 7, (66) 8 1875 4477 Email: NCRhose@NCR-Rubber.com Website: www.ncr-rubber.com
1035/83-85 Soi Pracharaj 33 Bangkok-Nonthaburi Road Bangsue, Bangsue Bangkok 10800 Thailand Tel: (66) 2910 8754 Email: rhanksupply@gmail.com Website: www.rhanksupply.com
314, 316, 318, 320, 322 Soi Chan 32 Chan Road Sathorn Bangkok 10120 Thailand Tel: (66) 2675 8230 Email: sales@nandee.co.th Website: www.nandee.co.th
16/1 Suwintawong Road Lampakchee, Nongchok Bangkok 10530 Thailand Tel: (66) 2989 4521 to 31 Email: EngSt@radicon.co.th Website: www.radicon.co.th
424/23-24 Kanchanapisek Road Dokmai, Prawet Bangkok 10250 Thailand Tel: (66) 2138 2962 to5Email: nobleeng@ksc.th.com Website: www.nobletec.co.th
46-52 Chalermkhet3Road Wat Thepsirin, Pomprab-Sattruphai Bangkok 10100 Thailand Tel: (66) 2621 5761 Email: infoskm@sahakimmotor.co.th Website: www.sahakimmotor.co.th
9 Sathorn Road Soi 13 Yan Nawa, Sathorn Bangkok 10120 Thailand Tel: (66) 2211 0053, (66) 8 6665 1451 Email: sales@orbit-hoseclips.com Website: www.orbit-hoseclips.com
8 Soi Ladkrabang 38 Ladkrabang, Ladkrabang Bangkok 10520 Thailand Tel: (66) 2326 9946 Email: marketing@suvarnabhumipipe.com Website: www.suvarnabhumipipe.com
P.V.S. TRADING ENGINEERING CO., LTD. 130/39-40 Soi Ramindra 40 Yak6Nuanchan, Bueng Kum Bangkok 10230 Thailand Tel: (66) 2944 6810 to7Email: pvssales@truemail.co.th
MB INDUSTRIAL AUTOMATION CO., LTD. 111 Soi Sukhumvit 62/1 Bang Chak, Phra Khanong Bangkok 10260 Thailand Tel: (66) 2741 4681 to4 Email: monchai@mbinau.com Website: www.mbinau.com
T.M.C. INDUSTRIAL PUBLIC CO., LTD. 125/10 Moo5Bansuan, Muang Chonburi 20000 Thailand Tel: (66) 3827 1933 Email: i_sale@tmc.co.th Website: www.tmc.co.th
Website: HANNIFIN PARKER www.pvsvalves.com THAILAND CO., LTD.
MAHATHON ELECTRIC CO., LTD. 59/9-10 Moo6Ekkachai Road Bang Bon, Bang Bon Bangkok 10150 Thailand Tel: (66) 2894 3447, (66) 8 1445 2766 Email: info@mahathon.co.th Website: www.mahathon.co.th
1265 Rama9Road Suan Luang Bangkok 10250 Thailand Tel: (66) 2186 7000 Website: www.parker.com
T.N. METAL WORKS CO., LTD. 92/1 Moo7Petchkasem Road Omnoi, Krathumban Samutsakorn 74130 Thailand Tel: (66) 2115 5000 Email: info@tnmetalworks.com Website: www.tnmetalworks.com
PREMIUM EQUIPMENT & ENGINEERING CO., LTD 46 BANGCHAN INDUSTRIAL ESTATE Moo 14 Serithai Road Min Buri Bangkok 10510 Thailand Tel: (66) 2919 8900 Email: premium@premium.co.th Website: www.premium.co.th
32 MODERN MANUFACTURING MYANMAR EDITION
TEXFOCUS CO., LTD. 6/5 Moo5Khlong Khwai, Samkhok Pathumthani 12160 Thailand Tel: (66) 2593 2000 to3Email: sales@texfocus.com Website: www.texfocus.com
DIRECTORY OF INDUSTRIAL MACHINERY & EQUIPMENT THAI POLLUTECH MACHINERY CO., LTD. 324/36 Bangna Residence Room 301-302, 310, 3rd Floor Sanphawut Road Bangna Bangkok 10260 Thailand Tel: (66) 2744 9002 Website: www.thaipollutech.com
TIRAWAT AIR COMPRESSOR LTD. 399 Worachak Road Pomprab Pomprab-Sattruphai Bangkok 10100 Thailand Tel: (66) 2223 1444 Email: sales@tirawatgroup.com Website: www.tirawatgroup.com
TOYOX TRADING (THAILAND) CO., LTD. 98 Bangchan Industrial Estate Soi Serithai 85, Kannayao Bangkok 10230 Thailand Tel: (66) 2906 3199 Email: info@toyoxthai.com Website: www.toyoxthai.com
U.P.E. ENGINEERING CO LTD. 22-22/2 Rama2Road Samae Dam, Bang Khun Thian Bangkok 10150 Thailand Tel: (66) 2451 1350 to 1 Email: upe_engineering@yahoo.co.th Website: www.upeengineering.com
UNION TERM CO., LTD. 45/7 Soi Chalermketh2Wat Thepsirin Pomprab-Sattruphai Bangkok 10100 Thailand Tel: (66) 2621 9460 to2Email: sales@union-therm.co.th Website: www.union-therm.co.th
HAND TOOLS, POWER TOOLS & ACCESSORIES, INSTRUMENT 3M THAILAND LTD. 159 Sermmit Tower 12th Floor. Asoke-Montri Road Khlongtoei Nua, Wattana Bangkok 10110 Thailand Tel: (66) 2260 8577, (66) 8 1818 1825 Website: www.3m.com/th
AMERICAN TOOL (THAILAND) CO., LTD. 26/4 Soi Chalermsook Ratchdapisek Road Chan Kasem, Chatuchak Bangkok 10900 Thailand Tel: (66) 2939 0524 to6Email: info@americantoolthailand.com Website: www.americantoolthailand.com
B&B SOLIMEC CO., LTD. 3775/6 Rama4Road Phra Khanong, Khlongtoei Bangkok 10110 Thailand Tel: (66) 2712 0898 Email: marketing@solimacgroup.com Website: www.solimacgroup.com
BLISS SERVICES (THAILAND) CO., LTD. 294/71-77 Rom Klao Road Khlong Sam Prawet, Ladkrabang Bangkok 10520 Thailand Tel: (66) 2184 9761 Email: CONTACT@BLISS.CO.TH Website: www.bliss.com.sg
1122 Soi Wachirathamsathit 57 Sukhumvit 101/1 Road Bang Chak, Phra Khanong Bangkok 10260 Thailand Tel: (66) 2746 3400
1874, 1874/1-3 Moo3Soi Narai2Thepharak Road Thepharak, Mueang Samutprakarn 10270 Thailand Tel: (66) 2758 2204 Email: info@boonsanfasteners.com Website: www.boonsanfasteners.com
HEXAGON METROLOGY (THAILAND) LTD.3Soi. Bangna-Trad 34 Bangna-Trad Road Bangna, Bangna Bangkok 10260 Thailand Tel: (66) 2361 3695 Email: contact.th@hexagonmetrology.com Website: www.hexagonmetrology.com
HITACHI POWER TOOLS (THAILAND) CO., LTD. 84, 88 Krungthep Kreetha Road Hua Mark, Bang Kapi Bangkok 10240 Thailand Tel: (66) 2379 4460 to 3, (66) 8 5447 0310 Email: customer-service@hitachi-powertools.co.th Website: www.hitachi-powertools.co.th
IRC TECHNOLOGIES CO., LTD. 719 KPN Tower Rama9Road Bang Kapi, Huai Khwang Bangkok 10310 Thailand Tel: (66) 2717 1400 Email: info@irct.co.th Website: www.irct.co.th
J. SRI RUNG RUENG IMPEX CO., LTD. 850/1 Soi Ladkrabang 30/5 Ladkrabang Road Ladkrabang, Ladkrabang Bangkok 10520 Thailand Tel: (66) 2327 0351 to5Email: salesjsr@jsr.co.th Website: www.jsr.co.th
JAKAWATNA NAWAKARN CO., LTD. 173-173/1 Soi 27 Rama2Road Bang Mod, Chom Thong Bangkok 10150 Thailand Tel: (66) 2870 0007 to9Email: jk_brushes@hotmail.com Website: www.jkbrushes.com
K.S. UNION CO., LTD. 91/29 Suwinthawong Road Min Buri Bangkok 10510 Thailand Tel: (66) 2543 6868 to9Email: marketing@ksunionbrush.com Website: www.ksunionbrush.com
120 Soi Somdetprachaotaksin 44 Dao Khanong Thon Buri Bangkok 10600 Thailand Tel: (66) 2876 2727 Email: welcome@virtus.co.th Website: www.virtus.co.th
5 Krungthep Kreetha Road Saphan Sung Bangkok 10250 Thailand Tel: (66) 2736 2122 Email: marketing@chosen.co.th Website: www.chosen.co.th
356, 358, 360 Sirindhorn Road Bangplad Bangkok 10700 Thailand Tel: (66) 2881 0800 to7Email: yourengineer1990@gmail.com Website: your-engineer1990.com
16 Soi Ekamai4Sukhumvit 63 Phra Khanong Nua, Wattana Bangkok 10110 Thailand Tel: (66) 2105 0555 Email: info@compomax.co.th Website: www.compomax.co.th
2034/128 Ital-Thai Building Bang Kapi, Huai Khwang Bangkok 10310 Thailand Tel: (66) 2369 2777 Email: info@keyence.co.th Website: www.keyence.co.th
162 Kanoksin Building Ramintra (Km.4) Anusaowaree, Bang Khen Bangkok 10220 Thailand Tel: (66) 2971 8000 Website: www.kanoksin.com
33 JANUARY - MARCH 2017
DIRECTORY OF INDUSTRIAL MACHINERY & EQUIPMENT KINGS BRITE CO., LTD.
92 Soi Phaholyothin 32, Phaholyothin Road Chan Kasem, Chatuchak Bangkok 10900 Thailand Tel: (66) 2941 6690 to 1, (66) 8 6478 5300 Email: infokb@kingsbrite.com Website: www.kingsbrite.co.th
Exchange Tower 31st, 34th Floor, Unit 3103, 3403-3404, No 388 Sukhumvit Road, Khlongtoei Bangkok 10110 Thailand Tel: (66) 2697 0000 Email: marketing_th@schaeffler.com Website: www.schaeffler.co.th
KUSUMA INTERTRADING CO., LTD. 161/33 Moo 1 Plutaluang, Sattahip Chonburi 20180 Thailand Tel: (66) 3811 0789, (66) 3811 0793 Email: service@kusumaintertrading.com Website: www.kusumaintertrading.net
M.T.K MARKETING CO., LTD. 20/55-56 Moo6Khlong Kum, Bueng Kum Bangkok 10230 Thailand Tel: (66) 2944 7858 Email: mtk@mtkshop.net Website: www.mtkshop.com
MAX VALUE TECHNOLOGY CO., LTD. 261 Soi On-Nut 17 Yaek 16 Sukhumvit 77 Road, Suan Luang Bangkok 10250 Thailand Tel: (66) 2717 7199 Email: sales@maxvalue.co.th Website: www.maxvalue.co.th
NILFISK-ADVANCE CO., LTD. 89 Soi Chokechai-Ruammitr Chom Phon, Chatuchak Bangkok 10900 Thailand Tel: (66) 2275 5630 Website: www.nilfisk.co.th
P.S.M. BEARING CO., LTD. 88 Moo4Soi Chaiyaphruek 18 (Phitaktham) Chaiyaphruek Road Taling Chan, Bangkok 10170 Thailand Tel: (66) 2882 2888 Email: psm_service@psmbearing.com Website: www.psmbearing.com
PISANU ENGINEERING CO., LTD. 800/43-45 Soi Trakun Suk, Asoke-Din Daeng Road Din Daeng, Bangkok 10400 Thailand Tel: (66) 2245 9113 Email: ecsales@pisanu.co.th Website: www.pisanu.co.th
PRIMUS CO., LTD. 119 Soi Srimuang Anusorn, Sutthisarnvinijchai Road Din Daeng, Bangkok 10400 Thailand Tel: (66) 2693 7005 Website: www.primusthai.com
QTC ENERGY PUBLIC CO., LTD. 2/2 Soi Krungthep Kreetha 8 (5) Krungthep Kreetha Road Hua Mark, Bang Kapi, Bangkok 10240 Thailand Tel: (66) 2379 3089 to 92 Email: contact@qtc-energy.com Website: www.qtc-energy.com
WIKA INSTRUMENTATION CORPORATION (THAILAND) CO., LTD. 850/8 Ladkrabang Road Ladkrabang, Ladkrabang Bangkok 10520 Thailand Tel: (66) 2326 6876 to 80 Email: info.th@wika.com Website: www.wika.co.th
SOON THAI JUN IMPORT LTD., PART. 88/3-90 Soi Pathumkongka Trimitr Road Samphanthawong, Samphanthawong Bangkok 10100 Thailand Tel: (66) 2234 9555 Email: soonthaijun@gmail.com Website: www.grouplst.com
SUVARNABHUMI PIPE INDUSTRY CO., LTD. 8 Soi Ladkrabang 38 Ladkrabang, Ladkrabang Bangkok 10520 Thailand Tel: (66) 2326 9946 to 49 Email: contact@suvarnabhumipipe.com Website: www.suvarnabhumipipe.com
ELECTRICAL & ELECTRONICS PRODUCTS Conduit & Raceway Systems, Control & Automation, Electric Wires & Cables, Electrical Equipment, Electrical Motors, Electrical Safety System, Electronic Equipment, Generators, Switch Boards & Controllers, Transformers,Uninterrupted Power Supply (UPS) 3M THAILAND LTD. 159 Sermmit Tower 12th Floor Asoke-Montri Road Khlongtoei Nua, Wattana Bangkok 10110 Thailand Tel: (66) 2260 8577, (66) 8 1818 1825 Website: www.3m.com/th
SYSTRONICS CO., LTD. 612 Jarunsanitwong Road Bang-Aw, Bangplad Bangkok 10700 Thailand Tel: (66) 2879 1127 to9Email: info@systronics.co.th Website: www.systronics.co.th
ABB LIMITED (MYANMAR BRANCH) Unit 6A, 6th Floor, Centre Point Towers, No.65 Corner of Sule Pagoda Road and Merchant Street Kyauktada Township Yangon The Republic of the Union of Myanmar Tel: (95) 1384 541 Email: daw-nwe-nwe.oo@th.abb.com Website: www.abb.com.mm
TECHNO KIKAI CO., LTD. 46/260 Soi Navamin 74 Navamin Road Khlong Kum, Bueng Kum Bangkok 10230 Thailand Tel: (66) 2947 9801 to3Email: sales@technokikai.com Website: www.technokikai.com
THK LM SYSTEM PTE LTD. Bangna Tower, Tower A#1701, 2/3 Moo4Bangna-Trad (Km.6.5) Bangkaew, Bangplee Samutprakarn 10540 Thailand Tel: (66) 2751 3001 Website: www.thk.com
TKK CORPORATION CO., LTD.
100 Moo4Soi Wat Saothongklang Bangna-Trad Road (Km.23) Bangsaothong, Bangsaothong Samutprakarn 10540 Thailand Tel: (66) 2397 9200 Email: info@abexhyd.com Website: www.abexhyd.com
ABSOLUTE ENGINEERING CO., LTD.
71 Soi Yenjit6Thungwaddon, Sathon Bangkok 10120 Thailand Tel: (66) 2211 7892 Email: sales@tkkcorporation.com Website: www.tkkcorporation.com
666/26 Soi Pracharat Bamphen 26/8 Samsennork, Huai Khwang Bangkok 10310 Thailand Tel: (66) 2690 5800 Email: absoluteengin@gmail.com Website: www.absolute-engineering.com
1015/6-8 Sukhumvit 71 Road Khlong Tan Nua, Wattana Bangkok 10110 Thailand Tel: (66) 2392 9913 to4Email: wuthi@veerasiamhardware.com Website: www.veerasiamhardware.com
65/205 Chamnan Phenjati, 24th Floor Rama9Road Huai Khwang, Huai Khwang Bangkok 10320 Thailand Tel: (66) 2248 3140, (66) 8 6898 1177 Email: sales.th@advantech.com Website: www.advantech.co.th
34 MODERN MANUFACTURING MYANMAR EDITION
DIRECTORY OF INDUSTRIAL MACHINERY & EQUIPMENT AEROFLUID CO., LTD.
169/4, 169/5 Moo 1 Rangsit-Nakornnayok Road Lampakkud Thanyaburi Pathumthani 12110 Thailand Tel: (66) 2577 2999, (66) 8 1359 9155, (66) 8 6055 0026 Email: info@aerofluid.com Website: www.aerofluid.com
76 Soi Supapong3Yaek 8 Nong Bon, Prawet Bangkok 10250 Thailand Tel: (66) 2748 1993 Website: www.hipglobal.co.th
ALPHA ELECTRIC ENGINEERING CO., LTD. 33/101 Moo 10 Bangpla, Bangplee Samutprakarn 10540 Thailand Tel: (66) 2752 5015 to7Email: alpha.electricengineering@gmail.com Website: www.alpha-electric.co.th
APT GROUP CO., LTD. 2014/32-36 Moo4Theparak Muang Samutprakarn 10270 Thailand Tel: (66) 2757 8222 Email: sales@aptgroup.co.th Website: www.aptgroup.co.th
COMPOMAX CO., LTD. 16 Soi Ekamai4Sukhumvit 63 Phra Khanong Nua, Wattana Bangkok 10110 Thailand Tel: (66) 2105 0555 Email: info@compomax.co.th Website: www.compomax.co.th
CONNEXALL CO., LTD. 899/50 Moo 21 Soi Chongsiri Parkland Bangpleeyai, Bangplee Samutprakarn 10540 Thailand Tel: (66) 2313 3400 to 1 Email: sales@connexall.co.th Website: www.connexall.co.th
63/57 Moo2Soi 81 Petchkasem Road Nong Khang Phlu, Nong Khaem Bangkok 10160 Thailand Tel: (66) 2420 9590 Email: sale@asiadrive.net Website: www.asiadrive.net
909 Ample Tower, 5th Floor, Bangna-Trad Road Bangna, Bangkok 10260 Thailand Tel: (66) 2744 0110 Email: sales.thailand@draeger.com Website: www.draeger.com
54 Soi Wachirathamsathit 18 Sukhumvit 101/1 Road Bangna, Bangna, Bangkok 10260 Thailand Tel: (66) 2399 5443, (66) 2747 9009 Email: yingroj@asiatech.co.th Website: www.asiatech.co.th
89/1 Kasemsap Building, 4th Floor, Vibhavadi-Rangsit Road, Chom Phon, Chatuchak Bangkok 10900 Thailand Tel: (66) 2511 5300 Email: chalalaikwansuwan@eaton.com Website: www.eaton.co.th
631 SCG Tower 2nd Floor, Nonsi Road Chong Nonsi, Yan Nawa Bangkok 10120 Thailand Tel: (66) 2681 5050 Email: ratchanok@avera.co.th Website: www.avera.co.th
11 Soi Ruam Mit Phatthana Yaek6Watcharaphol Road Taraeng, Bang Khen Bangkok 10220 Thailand Tel: (66) 2793 8787 Email: info@eda.co.th Website: www.eda.co.th
3775/6 Rama4Road, Phra Khanong Khlongtoei, Bangkok 10110 Thailand Tel: (66) 2712 0898 Email: marketing@solimacgroup.com Website: www.solimacgroup.com
56 Yada Bldg, 8th Floor No. 802-803 Silom Road Sriyawongse, Bang Rak Bangkok 10500 Thailand Tel: (66) 2652 5156 Email: info@eletto.co.th Website: www.eletto.co.th
25/12 Moo 20 Theparak (Km.12) Bangpleeyai, Bangplee Samutprakarn 10540 Thailand Tel: (66) 2312 3995 Email: info@bitwise.co.th Website: www.bitwise.co.th
BTT UNITED CO., LTD.
212/3 Soi Krungthep-Nonthaburi 37 Krungthep-Nonthaburi Road Wongsawang, Bangsue, Bangkok 10800 Thailand Tel: (66) 2586 8733, (66) 8 1777 8297 Email: info@bttunited.com Website: www.bttunited.com
220/9 Moo 12 Tachang, Bangklam Songkla 90110 Thailand Tel: (66) 7455 4447 to 8 Email: sale@hatyaipm.com Website: www.hatyaipm.com
18th Floor, Ramaland Bldg., No. 952 Rama IV Road Bang Rak, Bangkok 10500 Thailand Tel: (66) 2632 9292, (66) 8 9793 1888 Website: www.hitachi.co.th
IBCON CO., LTD. 72, 74 Romklao Road Min Buri, Min Buri, Bangkok 10510 Thailand Tel: (66) 2917 3780 Website: www.ibcon.com
INDUSTRIAL X SUPPLY CO., LTD. 50/3 Moo2Soi Udomsuk 53, Sukhumvit 103 Road Nong Bon, Prawet Bangkok 10260 Thailand Tel: (66) 2361 6662 to4Email: sales@industrialxsupply.com Website: www.industrialxsupply.com
INTERFACECOM CO., LTD. 327, 329, 331, 333 Karnchanapisak Road Lak Song, Bang Khae Bangkok 10160 Thailand Tel: (66) 2803 6855 Email: info@interfacecom.co.th Website: www.interfacecom.co.th
INTERROLL (THAILAND) CO., LTD. 700/685 Amatanakorn Industrial Estate Moo 1 Phanthong, Phanthong Chonburi 20160 Thailand Tel: (66) 3831 6400 Email: th.sales@interroll.com Website: www.interroll.com
INVERTER SOLUTION CO., LTD. 87/511 Kanchanapisek Road Bang Bon, Bang Bon Bangkok 10150 Thailand Tel: (66) 2899 6800 Email: sales@inverter-solution.com Website: www.inverter-solution.com
IRC TECHNOLOGIES LIMITED (KEYSIGHTâ&#x20AC;&#x2122;S DISTRIBUTOR) 719, 4th Floor, KPN Tower Rama9Road Bang Kapi, Huai Khwang, Bangkok 10310 Thailand Tel: (66) 2717 1400 Email: info@irct.co.th Website: www.irct.co.th
K & P F.A CENTER CO., LTD. 259/83 Soi Preedi Panomyong 13 (Phibulwej) Sukhumvit 13 Road Phra Khanong Nua, Wattana Bangkok 10110 Thailand Tel: (66) 2381 4681 to 93 Email: marketing@kpt-group.com Website: www.kpt-group.com
35 JANUARY - MARCH 2017
DIRECTORY OF INDUSTRIAL MACHINERY & EQUIPMENT KANOKSIN EXPORT IMPORT CO., LTD.
162 Kanoksin Building Ramindra (Km.4) Anusaowaree, Bang Khen Bangkok 10220 Thailand Tel: (66) 2971 8000 Website: www.kanoksin.com
314, 316, 318, 320, 322 Soi Chan 32 Chan Road, Sathon Bangkok 10120 Thailand Tel: (66) 2675 8230 Email: sales@nandee.co.th Website: www.nandee.co.th
119 Soi Srimuang Anusorn Sutthisarnvinijchai Road Din Daeng Bangkok 10400 Thailand Tel: (66) 2693 7005 Website: www.primusthai.com
OA. SALES AND SERVICE CO., LTD.
89/2 Moo5Samae Dam, Bang Khun Thian Bangkok 10150 Thailand Tel: (66) 2451 6670 Email: info@oas.co.th Website: www.oas.co.th
900, 8th Floor Zone C, Tonson Tower Ploenchit Road Lumpini, Pathumwan Bangkok 10330 Thailand Tel: (66) 2251 1871 Email: sales@orientalmotor.co.th Website: www.orientalmotor.co.th
22/7-9, 22/37-41 Moo4Bangna-Trad Road Bangbor Samutprakarn 10560 Thailand Tel: (66) 2705 5888 Email: qcontrol.q-control.co.th Website: www.q-control.co.th
KEYENCE (THAILAND) CO., LTD. 2034/128 Ital-Thai Building Bang Kapi, Huai Khwang Bangkok 10310 Thailand Tel: (66) 2369 2777 Email: info@keyence.co.th Website: www.keyence.co.th
LED SPECTRUM CO., LTD. 194 Moo6Saima, Muang Nonthaburi 11000 Thailand Tel: (66) 2903 5575 Website: www.ledspectrumthai.com
PANASONIC ECO SOLUTIONS SALES (THAILAND) CO., LTD. 18th Floor, Silom Complex Bldg., 191 Silom Road Bang Rak, Bangkok 10500 Thailand Tel: (66) 2231 3683 to7Email: ml_pewsth_support@th.panasonic.com Website: www.pessth.panasonic.co.th
PHOENIX CONTACT (THAILAND) CO., LTD. 797, 1st and 2nd Floor Rama9Road Bang Kapi, Huai Khwang, Bangkok 10310 Thailand Tel: (66) 2719 7957 Email: info@phoenixcontact.co.th Website: www.phoenixcontact.com
261 Soi On-Nut 17 Yaek 16 Sukhumvit 77 Road Suan Luang, Bangkok 10250 Thailand Tel: (66) 2717 7199 Email: sales@maxvalue.co.th Website: www.maxvalue.co.th
800/43-45 Soi Trakun Suk, Asoke-Din Daeng Road Din Daeng, Bangkok 10400 Thailand Tel: (66) 2245 9113 Email: ecsales@pisanu.co.th Website: www.pisanu.co.th
MB INDUSTRIAL AUTOMATION CO., LTD.
111 Soi Sukhumvit 62/1 Bang Chak, Phra Khanong, Bangkok 10260 Thailand Tel: (66) 2741 4681 to4 Email: monchai@mbinau.com Website: www.mbinau.com
476/2-4 Soi Pattanakarn 53 Pattanakarn Road, Suan Luang Bangkok 10250 Thailand Tel: (66) 2322 0810 to6Email: prasop@powerade.co.th Website: www.powerade.co.th
MOTOLOGY (THAILAND) CO., LTD. 55/26 Moo4Bueng Kham Phro Lumlukka, Bangkok 12150 Thailand Tel: (66) 2150 7808 to 10, (66) 8 1628 7321, (66) 8 1890 5050 Email: sales@motology.co.th Website: www.motology.co.th
NAMSANG ENGINEERING CO., LTD. (NSE) 759 Rama3Road Bangpongpang, Yan Nawa Bangkok 10120 Thailand Tel: (66) 2294 8946, (66) 2708 5991 Email: namsang@namsang.com Website: www.namsang.com
POWERMATIC CO., LTD. 50/1 Soi Tiwanon 40 Tiwanon Road Nonthaburi 11000 Thailand Tel: (66) 2952 4400 (Thailand), +959261036495 (Myanmar) Email: Chairatm@powermatic.co.th Website: www.powermatic.co.th
PREMIER PRODUCTS PUBLIC CO., LTD.2Soi Premier2Srinakarin Road Prawet, Bangkok 10250 Thailand Tel: (66) 2301 2100 to 1 Email: narongt@pp.premier.co.th Website: www.premier-products.co.th
36 MODERN MANUFACTURING MYANMAR EDITION
QUALITECH CONTROL CO., LTD. 116/97-101 Nonsi Road Chong Nonsi, Yan Nawa Bangkok 10120 Thailand Tel: (66) 2681 1180 (Auto), (66) 8 9699 3637 Email: sales@qualitech.co.th Website: www.qualitech.co.th
ROYALTEC INTERNATIONAL CO., LTD. 350 Soi Lardprao 94 Wang Thonglang Bangkok 10310 Thailand Tel: (66) 2934 4790, (66) 8 5905 9757 Email: info@royaltec.com Website: www.royaltec.com
S.T. CONTROL CO., LTD. 84/1 Soi Ramkhamhaeng9Ramkhamhaeng Road Pubpla, Wang Thonglang Bangkok 10310 Thailand Tel: (66) 2105 5999 Email: info@stcontrol.com Website: www.stcontrol.com
SAHAMIT MACHINERY PUBLIC CO., LTD. 42, 48 Rama3Road, Soi 53 Yan Nawa Bangkok 10120 Thailand Tel: (66) 2295 1000 Email: service@sahamit.co.th Website: www.sahamit.co.th
SATO AUTO-ID (THAILAND) CO., LTD. 292/1 Moo 1 Theparak Road Theparak Muang Samutprakarn 10270 Thailand Tel: (66) 2736 4460 Email: sales-stc@sato-global.com Website: www.satothailand.co.th
DIRECTORY OF INDUSTRIAL MACHINERY & EQUIPMENT SATTEL (THAILAND) CO., LTD.
52/84 Moo4Soi Phaholyothin 52 Khlong-Tanon, Sai-Mai Bangkok 10220 Thailand Tel: (66) 2937 8729 to 30 Email: sale_stt@hotmail.com Website: www.sattelthailand.com
549/9 On-Nut Road Prawet, Bangkok 10250 Thailand Tel: (66) 2743 8888, (66) 8 4026 8292 Email: saleshq@tic.co.th Website: www.tic.co.th
SERVO DYNAMICS (THAILAND) CO., LTD. 52/210 Moo2Soi Wadnamdaeng Srinakarin Road Bangkaew, Bangplee Samutprakarn 10540 Thailand Tel: (66) 2753 5625 Email: info@servoline.com Website: www.servoline.com
SILIC STABLE SERVICE CO., LTD. 98/3 Moo2Buengnamruk Thanyaburi Pathumthani 12110 Thailand Tel: (66) 2156 9294 to 97 Email: warapoj@silic.co.th Website: www.silic.co.th
SMART MOTIONTECH CO., LTD. 294/71-77 Romklao Road Khlong Sam Prawet, Ladkrabang Bangkok 10520 Thailand Tel: (66) 2184 9798 to9Email: info@smart-motion.co.th Website: www.smart-motion.co.th
SMARTECH AUTOMATION PARTS CO., LTD. 88 Moo2Bangpla, Bangplee Bangkok 10540 Thailand Tel: (66) 2750 8288 Email: sales@smartech.co.th Website: www.smartech.co.th
TKK CORPORATION CO., LTD. 71 Soi Yenjit6Thungwaddon, Sathon Bangkok 10120 Thailand Tel: (66) 2211 7892 Email: sales@tkkcorporation.com Website: www.tkkcorporation.com
ULTRA ENGINEERING CO., LTD. 2/7 Soi Mooban Settakit6Bang Khae Nua, Bang Khae Bangkok 10160 Thailand Tel: (66) 2444 0844 Email: Sales@ultraengineering.co.th Website: www.ultraengineering.co.th
VEERASIAM HARDWARE CO., LTD. 1015/6-8 Sukhumvit 71 Road Khlong Tan Nue, Wattana Bangkok 10110 Thailand Tel: (66) 2392 9913 to4Email: wuthi@veerasiamhardware.com Website: www.veerasiamhardware.com
VP AUTOMATION SYSTEM CO., LTD. 48/12 Moo 13 Phuttamonthon5Road Raikhing, Sampran Nakorn Phatom 73210 Thailand Tel: (66) 2445 3881 Email: Sompong@vp-automation.co.th Website: www.vp-automation.co.th
SYSTRONICS CO., LTD. 612 Jarunsanitwong Road Bangor, Bangplad Bangkok 10700 Thailand Tel: (66) 2879 1127 to9Email: info@systronics.co.th Website: www.systronics.co.th
T&D POWER TECH(THAILAND) CO., LTD. 22/26 Sukhaphiban2Road Prawet, Prawet Bangkok 10250 Thailand Tel: (66) 2002 4395 to7Email: info@tdpowertech.com
DOUBLE PINE CO., LTD. 1448/18 Ladprao 87 (Soi Chantrasuk) Praditmanutham Road Khlong Chan, Bang Kapi Bangkok 10240 Thailand Tel: (66) 2515 0600 (Auto 12 lines) Website: www.doublepine.co.th
EMERSON (THAILAND) LTD. 555 Rasa Tower 2, 14th Floor, Unit 1401-1402 Phaholyothin Road Chatuchak Bangkok 10900 Thailand Tel: (66) 2937 1190 Email: emersonprocess.thailand@emerson.com Website: www.emersonprocess.com
ENOVA AUTOMATION CO., LTD. 134/469 Nonthaburi Road Thasai, Muang Nonthaburi 11000 Thailand Tel: (66) 2967 1379 Email: sales@enovagroup.net Website: www.enova.co.th
EXTRA SOLUTION ENGINEERING CO., LTD. 99/218A Phanasoncity Village Bangmuang, Muang Samutprakarn 10280 Thailand Tel: (66) 2703 0703 Email: info@e-s-e.co.th Website: www.e-s-e.co.th
HITACHI SUNWAY INFORMATION SYSTEMS THAILAND LTD. 252/21 Unit E. 17th Floor Muang Thai-Phatra Office Tower I Rachadaphisek Road Huai Khwang Bangkok 10310 Thailand Tel: (66) 2693 2090 to4Email: contact@hitachi-sunway-is.com Website: www.hitachi-sunway-is.com
APPLICATION, SOFTWARE & SOLUTION PROVIDERS CAD INNOVATIVE CO., LTD. 40 Visessiri Bulding 2, 5th Floor, Thetsaban Rangsan Nua Road Ladyao, Chatuchak Bangkok 10900 Thailand Tel: (66) 2591 6799 Email: sales@cadinnovative.co.th Website: www.cadinnovative.co.th
731/27 Trok Watchan Nai Bangpongpang, Yan Nawa Bangkok 10120 Thailand Tel: (66) 2293 1845, (66) 8 1634 9115
I-MARK SOLUTIONS CO., LTD. 507/321 Freight Link Tower 6th Floor Soi Sathupradith 31 Sathupradith Road Chong Nonsi, Yan Nawa Bangkok 10120 Thailand Tel: (66) 2674 1383 Email: kreingsakp@imarksolutions.co.th Website: www.imarksolutions.co.th
662/47-48 Rama3Road Bangpongpang, Yan Nawa Bangkok 10120 Thailand Tel: (66) 2293 0211 Email: info@comgraph.co.th Website: www.comgraph.co.th
19/62 Moo 10 Khlong Nueng, Khlong Luang Pathumthani 12120 Thailand Tel: (66) 2832 5999 Website: www.linde-mh.com
37 JANUARY - MARCH 2017
DIRECTORY OF INDUSTRIAL MACHINERY & EQUIPMENT MARKEM-IMAJE LTD. 2nd Floor, RN Building, 961 Rama3Road Bangpongpang Yan Nawa Bangkok 10120 Thailand Tel: (66) 2689 7333 Website: th.markem-imaje.com
MATERIAL AUTOMATION (THAILAND) CO., LTD. 29th Floor, CTI Tower 191/11-12 Ratchadapisek Road Khlongtoei, Khlongtoei Bangkok 10110 Thailand Tel: (66) 2261 5100 Email: info-th@mat.co.th Website: www.mat.co.th
RIVER PLUS CO., LTD. 99/9 Central Plaza Chaengwattana Office Tower 19th Floor Room No.1907-9 Moo2Chaengwattana Road Bangtarad, Pak-Kred Nonthaburi 11120 Thailand Tel: (66) 2835 3539 Email: sales@riverplus.com Website: www.riverplus.com
SOLUTION CENTER CO., LTD. 17th Floor, A.P.Nakarintr Bldg., 88 Soi Lasalle 58 Bangna, Bangna Bangkok 10260 Thailand Tel: (66) 2748 6211 Email: jarunee@SolutionCenterMinitab.com Website: www.solutioncenterminitab.com
SP VISION TECHNOLOGY CO., LTD. 5/1 Moo 8 Samrong-Nue, Muang Samutprakarn 10270 Thailand Tel: (66) 2186 4572 Email: sales@sp-vt.com Website: www.sp-vt.com
SSI SCHAEFER SYSTEMS INTERNATIONAL CO., LTD. 3904-5, 9th Floor BB Building, 54 Sukhumvit 21 (Asoke) Khlongtoei Nua, Wattana Bangkok 10110 Thailand Tel: (66) 2204 0205 Website: www.ssi-schaefer.co.th
TAT ENERGY AND ENGINEERING CO., LTD. 1083/37 Krungthep-Nonthaburi Road Wongsawang, Bangsue Bangkok 10800 Thailand Tel: (66) 2910 9728 to 29 Email: Marketing@tat.co.th Website: www.tat.co.th
ZI-ARGUS LTD. 278 B1, Floor 1-2 Raintree Office Garden Soi Soonvijai4Rama IX Road Bang Kapi, Huai Khwang Bangkok 10310 Thailand Tel: (66) 2319 9933 Email: bangkok@zi-argus.com Website: www.zi-argus.com
FACTORY MANAGEMENT, OTHER PRODUCTS & SERVICES Chemical, Material Handling, Metrology, Warehousing, Waste Management
METRO LUBRICANTS.CO., LTD. 42/9 Thawi Watthana-Kanchanaphisek Road Thawi Watthana, Thawi Watthana Bangkok 10170 Thailand Tel: (66) 2887 1091 Email: customerservices@metrolubricants.co.th Website: www.metrolubricants.co.th
159 Sermmit Tower 12th Floor, Asoke-Montri Road Khlongtoei Nua, Wattana Bangkok 10110 Thailand Tel: (66) 2260 8577, (66) 8 1818 1825 Website: www.3m.com/th
23/110-117 Sorachai Building, 25-29th Floor Soi Sukhumvit 63 (Ekamai) Watthana, Khlong Tan Nua Bangkok 10110 Thailand Tel: (66) 2787 8500 Email: info_mhe@mhe-demag.com Website: www.mhe-demag.com
235/18 Rajpattana Road Saphan Sung, Saphan Sung Bangkok 10240 Thailand Tel: (66) 2927 5825
82/8 Moo3Watnamdang Road Bangpleeyai, Bangplee Samutprakarn 10540 Thailand Tel: (66) 2751 0389 Website: www.mrich.co.th
GETECE CO., LTD. 208 Wireless Road Bldg. 15th Floor, Unit 1501 Wireless Road Lumpini, Pathumwan Bangkok 10330 Thailand Tel: (66) 2651 5551 to4Email: info@getece.com Website: www.getece.com
HEXAGON METROLOGY (THAILAND) LTD.3Soi. Bangna-Trad 34 Bangna-Trad Road, Bangna, Bangna Bangkok 10260 Thailand Tel: (66) 2361 3695 Email: contact.th@hexagonmetrology.com Website: www.hexagonmetrology.com
IS INDUSTRIE (THAILAND) LTD. Thai-French Innovation Institute Bld. (8th Floor), No. 1518 Pracharat Sai 1 Road Wongsawang, Bangsue Bangkok 10800 Thailand Tel: (66) 2585 9070 Website: www.is-industrie.co.th
KEEEN LIMITED 86, 88, 90 Chalermprakiat Rama9Road Nong Bon, Prawet Bangkok 10250 Thailand Tel: (66) 2747 2102 to3Email: Info@keeen.co.th Website: www.keeen.co.th
MECHATRIC CO., LTD. 1564/19 Pracharaj 1 Road Bangsue, Bangkok 10800 Thailand Tel: (66) 2587 8462 to3Website: www.mechatric.co.th
38 MODERN MANUFACTURING MYANMAR EDITION
P.T.K. EQUIPMENT CO., LTD. 34 Soi Pho Kaeo 1 Yaek3Khlong Chan, Bang Kapi Bangkok 10240 Thailand Tel: (66) 2948 4160 Website: www.ptksafety.com
REP-FLOOR CO., LTD. 112/28 Moo6Soi Suksawat 76 Suksawat Road Bang Chak, Phra Pradaeng Samutprakarn 10130 Thailand Tel: (66) 2817 8159 Email: info@repfloor.co.th Website: www.repfloor.co.th
SYNTHETECH CO., LTD. 135 Soi Ramkhamhaeng 30/1 (Ramvilla) Ramkhamhaeng Road Hua Mark, Bang Kapi Bangkok 10240 Thailand Tel: (66) 2732 1300 to 3, (66) 8 9191 8830 Email: sales@synthetech.co.th Website: www.synthetech.co.th
V-SERVE LOGISTICS LIMITED 709/57 On-Nut Road Suan Luang Bangkok 10250 Thailand Tel: (66) 2332 3940 to5Email: vserve@v-servegroup.com Website: www.v-servelogistics.com
Part makers and assemblers are in constant need of solutions to achieve their targets with efficiency. These solutions need to encompass speed, strong quality and style. Manufacturing Expo 2017 will serve as the gateway to these solutions withagrowing list of 2,425 brands of technologies from 46 countries, as well as enhanced partnership networks through specially organized activities and seminars. Join us toward this evolution of technologies that will answer every manufacturing requirement together!
Exhibit space is open for reservation. +66 2686 7299 manufacturing-expo@reedtradex.co.th www.facebook.com/manufacturingexpopage www.manufacturing-expo.com
2124 Officially Supported by:
JUNE 2017 BITEC • BANGKOK THAILAND Organized by:
Modern Manufacturing Magazine : January-March 2017 Myanmar Edition